MYANMARTHWAY BLOG: May 2013
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်းတွေအရ ကျွန်တော်စိတ်အ၀င်စားဆုံးနဲ့ အတွေးဖြစ်ဆုံး အကြောင်းအရာက မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဘာသာရေးအခြေခံတဲ့၊ တစ်နည်း ဘာသာရေးဆက်နွှယ်တဲ့၊ တစ်နည်း ဘာသာရေးအမည်ခံတဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအနှံ့အပြားမှာ အဲဒီပြဿနာဟာ တကယ့်ကို ကိုင်တွယ်ရခက်တဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာနေပါတယ်။
အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုး၊ သုံးသပ်ချက်အမျိုးမျိုး၊ ဝေဖန်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖတ်ရှုရပါတယ်။ အဲဒီထဲက လူပြောအများဆုံး အသုံးအနှုန်းက "ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိုတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ တစ်နည်း အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တစ်နည်း အာဏာရှိသူတွေ၊ တစ်နည်း ပါတီတွေက နောက်ကွယ်ကနေ ဖန်တီးနေတယ်" ဆိုတာပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင်၊ ဟုတ်၏၊ မဟုတ်၏ ဒီနေရာမှာ မပြောလိုပါ။
ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ သေချာပေါက် လက်ခံရမှာတစ်ခုကတော့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရမတိုင်မီ နယက လက်ထက်အခါတုန်းက အခုလို ဘာသာအချင်းချင်းအကြား ပြဿနာဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာ တစ်ချိန်က တပ်မတော်အစိုးရကို တမ်းတနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ လွမ်းဆွတ်နေတာ မဟုတ်ဘူး၊ ချီးကျူးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတုန်းက အုပ်ချုပ်တဲ့လူဟာ ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူက သေချာသိတယ်။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ အားလုံးက သိပြီးဖြစ်တယ်။ ပြောရရင်တော့ အကြောက်တရားက အားလုံးကို ဟန့်တားထားခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ရောက်တော့ အရာအားလုံးဟာ ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဆန္ဒပြတာဟာ ဒီမိုကရေစီ၊ စီတန်းလှည့်လည်တာဟာ ဒီမိုကရေစီ၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ မကိုက်ညီရင် ဝေဖန်တာ၊ ဆန့်ကျင်တာဟာ ဒီမိုကရေစီ၊ လမ်းဘေးနံရံတွေပေါ်မှာ တွေ့ရာအရုပ်ရေးတာဟာ ဒီမိုကရေစီ၊ ဗီနိုင်းတစ်ခုထုတ်ပြီး လမ်းလယ်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာလည်း ဒီမိုကရေစီ၊ စသည်စသည်ဖြင့် ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ များလာခဲ့တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့အတွက် အရာအားလုံးကို ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး စတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကို ဆွဲသွင်းလိုက်ကြတယ်။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းလာတာကိုး။ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှု ဟုတ်၊ မဟုတ်တော့ သိပ်မသေချာဘူး။
ကုလားတစ်ယောက်က အခြားကုလားတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာ လူသတ်မှုပဲ။ တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူအပြစ်ပေးရမယ်။ ကုလားတစ်ယောက်က ဗမာတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်တယ်။ ဒါလည်း လူသတ်မှုပဲ။ တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူအပြစ်ပေးရမယ်။ အဲ... လက်တွေ့မှာ အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ ကုလားတစ်ယောက်က ဗမာတစ်ယောက်ကို သတ်ဖို့ဝေးစွ၊ ကုလားတစ်ယောက်က ဗမာတစ်ယောက်ကို အမှတ်တမဲ့ ၀င်တိုက်မိရင်တောင် ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ဖို့ အကြောင်းပြချက် လုံလောက်နေတယ်။ အခြားအရာတွေ ဆက်မပြောလိုဘူး။ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။
ကျုပ်တို့ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့ မြတ်စွာဗုဒ္ဓဆိုတာ သူ့ရဲ့တရားဓမ္မတွေကို စော်ကားတာ၊ သူ့ရဲ့ ကိုယ့်ကျင့်သိက္ခာကို ပုတ်ခတ်တာ၊ စတဲ့လုပ်ရပ်တွေ အသာထားဦး၊ သူ့အသက်ကို အသေသတ်ဖို့ ကြံစည်တဲ့လူကိုတောင် လက်သီးတစ်ချက် ပြန်ထိုးခဲ့သူ မဟုတ်ဘူး၊ ဒေါသတစ်ချက် ပြန်ထွက်ခဲ့သူ မဟုတ်ဘူး၊ ငါတော့ အဲဒီကောင်ကို မကျေနပ်ဘူးလို့ နောက်ပါသံဃာတွေကို တစ်ချက်မိန့်ခဲ့သူ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ တရားဓမ္မတွေကို ယုံကြည်သက်ဝင် ကျင့်ကြံနေကြပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မျက်လုံးတစ်လုံးဆို မျက်လုံးတစ်လုံး၊ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဆို လက်ချောင်းတစ်ချောင်း လုပ်နေကြတာဟာ သင့်လျော်၏ မသင့်လျော်၏ စဉ်းစားဖို့သင့်တယ်။
ဘာသာရေးဟာ သူ့ချည်းဖြူဖြူစင်စင်ဆိုရင် ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်နွှယ်သွားရင်တော့ အင်မတန်မှ အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ ရှင်အရဟံနဲ့ မင်းမြတ်အနော်ရထာ ပထမဆုံး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာက အရည်းကြီးတွေပါ။ သူတို့တွေကို ကျွန်တော်မြင့်ခဲ့ဖူးတာလည်း မရှိပါဘူး၊ တွေ့ခဲ့ဖူးတာလည်း မရှိပါဘူး။ စာတွေထဲမှာ ဖော်ပြထားချက်တွေအရ၊ လူကြီးသူမတွေ လက်ဆင့်ကမ်း ပြောပြချက်တွေအရ ကျွန်တော်ပုံဖော်ထားမိတာက အရည်းကြီးဆိုတာ သင်္ကန်းဝတ်ထားပြီး လူလိုနေတဲ့ လူတွေပါပဲ။ သဘောကတော့ သာမန်လူနဲ့ မတူတာက သင်္ကန်းဝတ်ထားမယ်၊ ကျန်တာက လူလိုပဲ အိပ်၊ စား၊ ကာမ ပေါ့။ ကျွန်တော့်ယူဆချက် ဧကန်အမှန်လို့ ကျွန်တော်မပြောလို၊ မှားလျှင် ပြင်ပေးကြပေါ့။ ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့တွေ ဒုတိယအနော်ရထာကို မျှော်ရတော့မှာလား၊ ဒုတိယရှင်အရဟံကို တောင့်တရတော့မှာလား ဆိုတာပါ။
လူအများအပေါ်မှာ သြဇာလွှမ်းမိုးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ (ဆရာတော်ကြီးတွေ၊ စာရေးဆရာတွေ၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေ၊ အဆိုတော်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ စတဲ့) ဟာ လူထုကို လမ်းမှားမရောက်အောင် ထိန်းပေးဖို့လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ တွေးမိတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်မရှိဘဲ ဟိုနားစုစုဆို ပါလိုက်၊ ဒီနားစုစုဆို ပါလိုက် လုပ်နေကြတာ မြင်နေရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ အထူးသဖြင့် စာရေးဆရာတွေ ဒီကိစ္စမှာ ကလောင်တွေ ၀ှက်ထားကြတယ်၊ ကလောင်တွေကို သိမ်းထားကြတယ်။ လူထုက မှားရင်မှားတယ်၊ မှန်ရင်မှန်တယ် ပြောပြရမှာပေါ့။ အခုဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာရေးပြဿနာတွေဟာ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုရင် မဖြစ်သင့်ကြောင်း ရေးပြ၊ ပြောပြသင့်တယ်။ ဖြစ်သင့်တယ်၊ မှန်တယ်ထင်ရင်လည်း အကြောင်းအကျိုးနဲ့ ရေးပြသင့်တယ်။ အခုတော့ နှာစေးနေလိုက်ကြတယ်။ သာမန်လူပြိန်းတွေး တွေးကြည့်လိုက်တယ်။ အခုဖြစ်နေတာတွေသာ မှန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူကမျှ မရေးရဲစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ သေချာပေါက် ၀မ်းသာအားရနဲ့ ချီးကျူးပြီး ရေးကြမှာပဲ။ အခုလို နှုတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတော့....။ ဒါလည်း စဉ်းစားသင့်တယ်။
တစ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်လို့တဲ့ဆိုရင် မှန်လား၊ မှားလား မစဉ်းစားအားဘူး။ လူစုစု၊ လက်နက်စုစုနဲ့ သွေးဆူဖို့၊ ဒေါသထွက်ဖို့က အရင်။ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်း စတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင် တာဝန်ရှိသူတွေက ဘာပြောပြော ဘယ်သူကမျှ အရေးမလုပ်တော့တာလည်း မြန်မာထုံးတမ်းတစ်ခု ဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒီအတွက် တာဝန်အရှိဆုံးက မီဒီယာတွေပဲ။ အုပ်ချုပ်သူဆိုရင် ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်ရမယ် ဆိုတဲ့အတွေး၊ တာဝန်ရှိသူဆိုတာ မဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့လူတွေ ဆိုတဲ့အတွေး၊ ငါတို့က လူအများစုဆိုရင် အုပ်ချုပ်သူ လူနည်းစုက လိုက်လျောရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေး စတဲ့စတဲ့ အတွေးတွေကို ပြည်သူတွေခေါင်းထဲရောက်အောင် ထည့်ပေးခဲ့တာက မီဒီယာတွေပဲ။ အခု ဘာသာရေးပြဿနာတွေမှာ မီဒီယာတွေ ဘာတွေတာဝန်ကျေသလဲ စောင့်ကြည့်ကြစေချင်တယ်။
ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ သံသယရှိသူ၊ သို့မဟုတ် ဆက်နွှယ်သူ၊ သို့မဟုတ် ပတ်သတ်သူကို တာဝန်ရှိသူတွေက ထိန်းသိမ်းတဲ့အခါ၊ တစ်နည်း ရဲစခန်းတွေမှာ ချုပ်နှောင်ထားတဲ့အခါ လူအုပ်နဲ့ဝိုင်းပြီး သူ့ကိုအပ်ပါတို့၊ သူ့ကို ထုတ်ပေးပါတို့ဆိုတာ ဘယ်ဥပဒေနဲ့အညီ တောင်းဆိုကြ၊ လုပ်ကြတာလဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်း တရားစီရင်ခွင့်၊ စစ်ဆေးခွင့်၊ အရေးယူခွင့်ကို ပြည်သူတွေထံ ပေးအပ်ထားတယ်လို့ မဖတ်မိပါဘူး။ ဘာလဲကွ... ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသား၊ လူအုပ်စုနဲ့ ရဲစခန်းဝိုင်းပြီး ဖမ်းထားတဲ့ တရားခံကို သူတို့လက်အပ်ပါဆိုတာ။ အဲဒါ မင်းမဲ့စရိုက် မဟုတ်လို့၊ ဘာတုန်း။ စာရေးဆရာတွေ၊ မီဒီယာတွေ ပြောကြလေဗျာ။ ကိုယ့်ဂျာနယ် မရောင်းရမှာကြောက်လို့ ပြည်သူမှားတာကို ထောက်မပြရဲတာတော့ သိပ်မနိပ်လှပါဘူးဗျာ။
မီဒီယာဆရာကြီးတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောတဲ့ နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်လိုသူတွေဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို ဆိုလိုမှန်းကို ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ဖြင့် တကယ်မသိရပါဘူးဗျာ။ ကိုယ်က အရမ်းကို ပြိန်းလွန်းတော့ ဉာဏ်မမီတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိတာကတော့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဟာ သူဖြစ်ချင်တဲ့နေရာမှာ သူဖြစ်ချင်တဲ့အချိန် ဘာမဟုတ်တာလေး တစ်ခုနဲ့လည်း ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကို နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်လိုသူတွေက ဖန်တီးတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှကို ဆက်စပ်လို့မရဘူး။ အဲဒီတော့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြောတဲ့သူ၊ ရေးတဲ့သူ၊ ဖြန့်တဲ့သူ ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားမှ ဖြစ်ချေတော့မယ်။ အဲဒီအခါ ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ နောက်ကြောင်းပြန် လှည့်လိုသူတွေရဲ့ အမည်စာရင်း ရလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတာပါပဲ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၉ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။
နံနက် ၂ နာရီ ၀၂ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 2:12 AM3Comment(s) Link This
ဖတ်မိသမျှ သတင်းများ၊ တွေးမိသမျှ အတွေးများ (မေ ၂၇၊ ၂၀၁၃)
မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ၆ သိန်းကျော်ရှိပေမယ့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်အရေအတွက်က ၇ သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို 7Day Daily သတင်းစာမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ သတင်းရေးသားသူက ဆွေမွန်တဲ့။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အရေအတွက်တွေအတွက် ကိုးကားခြင်းခံရသူက မြန်မာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အိုင်စီတီ (Mido) က ဒုအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးညီညီ တဲ့။ ကဲ... ဘာပြောရမလဲ။ မြန်မာပြည်က အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတိုင်းဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ယူဆချက်၊ မြန်မာပြည်မှာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ၆ သိန်းကျော် ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုပြီး အကောင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာ ရှာဖွေထားပါတယ် ဆိုတဲ့အချက်တွေကို ကျွန်တော်ဖြင့် ဘယ်လိုမှကို နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ အခုသတင်းကိုသာ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဆိုရင်၊ ဥပမာအားဖြင့် ဦးရဲထွဋ် ကသာ ပြောခဲ့တာဆိုရင် ဝေဖန်သံတွေ ပွက်ပွက်ဆူလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။ Mido ဆိုတာ ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာ မသိပေမယ့် အခုဖတ်ရတဲ့ သတင်းကြောင့် နှာခေါင်းရှုံ့မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ သတင်းရေးသားသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကရော ဘာများပါလိမ့်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့ ရိုက်ချက်ဟာ ပြင်ပကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အတွက် နှာခေါင်းရှုံ့စရာ၊ ကြောက်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ မီးမောင်းထိုးပြချင်တာလား...။ ဘာများပါလိမ့်ဗျာ...။
သမ္မတကြီးက အချို့သော ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဟာ နေ့စားခနဲ့ ဆန္ဒပြကြတယ်လို့ မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့တာကို မကျေနပ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒပြကြသတဲ့။ အင်း... ခက်တော့ ခက်ချေပြီ အစည်းအဝေးများ လျှော့ချရေးအတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပသည် ဆိုတာထက်တောင် ပိုဆိုးနေသလား မသိချေဘူး။ ဆန္ဒပြခြင်းသည် အခကြေးငွေယူ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြခြင်း ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းရေးရမလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။ ကောင်းပါတယ်လေ။ တစ်ချိန်တုန်းက လူစုမှာကိုတောင် ကြောက်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကနေ ဒီနေ့များတော့ တန်းစီလမ်းလျှောက်တာ၊ ဟိုဆိုင်းဘုတ်ကိုင် ဒီဆိုင်းဘုတ်ကိုင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာဟာ ဘာမျှထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်တော့ချေဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်နစ်နာလို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အခုလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ဘယ်သူကမျှ အလေးမထားတော့မှာ၊ ဂရုမမူကြတော့မှာကိုတော့ စိုးရိမ်မိတာ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် အမှန်တကယ် နစ်နာကြမှသာ ဆန္ဒပြကြပါလို့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်က ဒီနေရာကနေ ဆန္ဒဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ :D
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ဟာလည်း ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာ၊ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုက ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ လွန်ဆွဲပွဲကျင်းပခဲ့တာ၊ သမ္မတကြီးရဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာ၊ ကြွေးမြီတွေ လျှော်ပေးခဲ့တာ စတဲ့စတဲ့ ပြောစရာအဖုံဖုံနဲ့ပါပဲ။ အချို့သော အဆိုးမြင်တွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အခြားနိုင်ငံက ဘယ်အကြီးအကဲမျှ မလာသင့်သေးဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကြွေးမြီတွေ မလျှော်ပစ်သင့်သေးဘူး၊ လက်ရှိအစိုးရကို မယုံကြည်သင့်သေးဘူး၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ မဆက်ဆံသင့်ဘူး၊ စတဲ့အမြင်တွေအတွက် အံ့သြမိရပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ် ကွဲလွဲခွင့်ရှိပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးကို မမြင်လောက်အောင်တော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ သုံးသပ်မိကြောင်းပါ။
သမ္မတကြီးရဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ မှတ်ချက်တွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ သတင်းတွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေကလည်း ဖတ်လို့ကောင်းမှကောင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ကတော့ ပြိန်းတယ်ပဲပြောပြော၊ အ,တယ်ပဲပြောပြော၊ အမြင်မကျယ်ဘူးပဲဆိုဆို ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ်မှာ သဘောအကျဆုံးက အိမ်ဖြူတော်မှာ အိုဘားမားနဲ့ နှစ်ယောက်အတူထိုင်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့ မြင်ကွင်းကို သဘောအကျဆုံးပဲ။ သြော်... တစ်ဆက်တည်း ကျွန်တော့်နှမလေးတစ်ယောက် ပြောတဲ့စကားကိုလည်း သဘောကျမိသလို အတွေးလည်း ပွားမိတယ်။ သူကမေးပြောလေး ပြောရှာတယ်။ သူတို့သမ္မတကြီး မြန်မာနိုင်ငံကို လာတုန်းကကျတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က စကားပြောစင်မြင့်ကို အမေရိကန်တံဆိပ်ကြီးတွေ တပ်ထားပြီးတော့ မြန်မာသမ္မတကြီး သူတို့ဆီသွားပြီး မိန့်ခွန်းပြောတော့ ဘာဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်တွေ မတပ်ထားတာလဲတဲ့။ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်တော့ မဖြေတတ်တာ အမှန်ပါဗျာ။ ဖြေနိုင်သူတွေများရှိရင် ကွန်းမန့်တွေမှာ ရေးသားပေးကြစေလိုပါတယ်။ အင်း... တချို့ဟာတွေမှာ ကျွန်တော်တို့လို သာမန်နလပိန်းတုံးတွေ နားမလည်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်လို့ မေးခွန်းမေးတဲ့ နှမလေးကို အခုလောလောဆယ် ဖြေထားပါတယ်ဗျာ။
နေပြည်တော်က လမ်းတစ်ခုမှာ ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ ဂီယာမထိုးဘဲ ဖရီးထားရင် နောက်ကို အလိုလို ပြန်တက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကလည်း အွန်လိုင်းမှာ ပြောစရာဖြစ်နေပါရောလား။ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ ကြည့်ရတာဆိုတော့ ပြောဖို့တော့ အတော်ခက်သား။ စိတ်ဝင်စားမိကြောင်းပါ။ တစ်ရက်လောက် ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။
အကော်ဒီယံအုန်းကျော် သေဆုံးသွားတဲ့သတင်းကိုလည်း ၀မ်းနည်းစွာ ဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်အရွယ်တွေရဲ့ ငယ်ဘ၀တွေမှာ ရုပ်မြင်သံကြားကနေတစ်ဆင့် အမြဲလိုလို မြင်တွေ့ကြည့်ရှု ခံစားခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်မို့ သံယောဇဉ်ရှိတာ အမှန်ပါပဲ။ အားကစားပွဲသီချင်းတွေ၊ တိုင်းကျိုးပြည်ပြု သီချင်းတွေ အများအပြား ရေးသွားခဲ့သလို ရေးခဲ့သမျှ သီချင်းတွေကလည်း သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ သျှောင်ပေစူး သီချင်းကတော့ ဘယ်တော့မျှ မရိုးတော့မယ့် ဂန္ထ၀င်သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကို လွှမ်းစေရမည် ဆိုတဲ့ အသံသြသြကြီးကို ပြန်ပြီးတော့ ကြားယောင်မိကြောင်းပါ။ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်ပါစေ။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မှန်လုံအမြန်ယာဉ် တိမ်းမှောက်တဲ့ သတင်းကလည်း စိတ်မကောင်းစရာပါ။ သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမျှပြောဆိုလိုခြင်း မရှိပေမယ့် မြင်တွေ့နေရတဲ့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရ အဲဒီလောက်အထိ ဖြစ်သွားရအောင် ယာဉ်မောင်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ မောင်းနှင်ခဲ့သလဲ၊ အခုလို တိမ်းမှောက်မှုဟာ ဘာကြောင့်များ ဖြစ်ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိတာ အမှန်ပါပဲ။ သတင်းစာမှာ ဖတ်ရတာက ဘီးပေါက်ပြီး တံတားနှစ်စင်းကြားက လမ်းလယ်ကွန်ကရစ်တုံးတွေကို တိုက်မိတယ်တဲ့။ နိုင်ငံခြားကားတွေထဲမှာ ကားတွေဘာတွေ ဗုံးပေါက်ကွဲတာတို့၊ ချောက်ထဲကျတာတို့ ရိုက်ပြတာတောင် ဒီလောက်မဆိုးရွားဘူးဗျာ။ အခုဟာက ကားပေါ်က ပါလာတဲ့ ခရီးသည်တွေကို မပြောနဲ့ ကားကိုယ်ထည်ကိုတောင် ကြည့်ရက်စရာမရှိဘူး။ နောက်ပြီးတော့ သတင်းစာထဲမှာ ယာဉ်မောင်း ညွန့်ဝေ (စုံစမ်းဆဲ) ဆိုတာကို နားမလည်ဘူးဗျ။ အဲဒီယာဉ်မောင်းရဲ့ အသက်လည်းမသိဘူး၊ အဘအမည်လည်း မသိဘူး၊ နေရပ်လိပ်စာလည်း မသိဘူးဆိုတဲ့ သဘောသက်ရောက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီခရီးသည်တင်ယာဉ် တိမ်းမှောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီယာဉ်လိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေကို ယာဉ်မောင်းဘယ်သူ၊ ယာဉ်နောက်လိုက်ဘယ်သူ၊ ကားပေါ်မှာ ခရီးသည်ဘယ်နှဦးပါတယ်၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေပါ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေက ဘယ်လောက်ပါ စတဲ့အချက်အလက်တွေ မပေးနိုင်ဘူးလား။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေ ခရီးသွားတိုင်း မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေ၊ ဖုံးနံပါတ်တွေ ပေးနေရတာ ဘာကြောင့်လဲ။ လမ်းမှာရှိတဲ့ လုံခြုံရေးဂိတ်တွေကို ပေးဖို့သက်သက်ပဲလား။ ကဲပါဗျာ.. .ထားလိုက်ပါတော့။ အဲဒါက နည်းနည်းရှုပ်နေပါသေးတယ်။ အခုဟာက ဒီခရီးသည်တင် ကားတစ်စင်းလုံးကို မောင်းတဲ့ယာဉ်မောင်းရဲ့ အချက်အလက်တွေကို မသိရလောက်အောင် အဲဒီယာဉ်လိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ ညံ့ဖျင်းရသလား ဆိုတာကို တွေးနေမိပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။
မွန်းလဲ ၁၂ နာရီ ၁၉ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 12:22 PM0Comment(s) Link This
မယားသည်ကား လင်ရှာဖွေထားသည့် စီးပွားဥစ္စာကို စောင့်ရှောက်ရုံမျှသာတည်း။
အိမ်ထောင်တစ်ခုတွင် လင်သာလျှင် ပဓာနဖြစ်၏။ မယားသည်ကား အပ်သွားရာ လိုက်ပါနေရသော အပ်ချည်ကဲ့သို့သာတည်း။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:39 AM0Comment(s) Link This
ကွန်ပျူတာထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ဦးဘဂျမ်းကာတွန်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကို ညနေပိုင်းက ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဦးဘဂျမ်းရဲ့ ကာတွန်းတွေကို ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် ဖတ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုလို တစ်စုတစ်စည်းတည်းကတော့ အခုမှပဲ တစ်ထိုင်တည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှန်း မသိပေမယ့် ဒီလိုစာအုပ်တွေကို အွန်လိုင်းက မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဖတ်ခွင့်ရအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဦးစွာပြောလိုပါတယ်။ အရင်ကတည်းက ဂျာနယ်အချို့၊ မဂ္ဂဇင်းအချို့မှာ ဦးဘဂျမ်းရဲ့ ကာတွန်းလက်ရာအချို့ကို ဖော်ပြကြတာ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သဘောကျခဲ့ရပါတယ်။ လေးစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ ဦးဘဂျမ်းလက်ရာ ပေါင်းချုပ်စာအုပ် ၂ အုပ်ကို ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှပဲ အရင်တုန်းက ကျွန်တော်သဘောကျခဲ့တာဟာ တကယ့်ကို ဘာမျှသေသေချာချာမသိဘဲ သဘောကျခဲ့တာပါလားလို့ သိခွင့်ရပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးသမျှ ဦးဘဂျမ်း ကာတွန်းလေးတွေဟာ ကျွန်တော့်ရင်ကို ထိတဲ့အတွက် သဘောကျခဲ့တာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဦးဘဂျမ်းဆိုတာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုပါ မြည်းစမ်းခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကာတွန်းတွေဖတ်ပြီး အံ့သြမှုဖြစ်ရ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖြစ်ရ၊ လေးစားမှုဖြစ်ရ၊ စတဲ့ ခံစားမှုပေါင်းစုံနဲ့ အတော်ကြီးကို ဗလောင်ဆူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးဘဂျမ်းဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာ သူ့ခေတ်သူ့အခါက ဖြစ်ပျက်သမျှ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေ အ၀၀ကို ကာတွန်းတွေထဲမှာ ပြောခဲ့ပါလားဆိုတာ သိခွင့်ရခဲ့တယ်။ သမိုင်းစာအုပ် ပြန်ဖတ်စရာမလိုဘဲ အဲဒီကာတွန်း ရေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို အကဲခတ်နိုင်လောက်တဲ့အထိ သူ့ကာတွန်းတွေက စကားတွေပြောခဲ့ပါတယ်။ ကဲပါဗျာ... ဦးဘဂျမ်းကို ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်က ချီးကျူးမှမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဟာသူ နာမည်မသေတဲ့ မြန်မာပုဂ္ဂိုလ်ကျော်တစ်ဦးအဖြစ် သမိုင်းကမ္ဗည်း ရေးထိုးပြီးသားပါ။ ဦးဘဂျမ်း ကာတွန်းတွေဟာ အစွန်းလွတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အစိုးရဘာလုပ်လုပ် ဝေဖန်မယ်ဆိုတဲ့လူ မဟုတ်သလို၊ ပြည်သူတွေ ဘာလုပ်လုပ် မှန်တယ်လို့ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး မြှောက်ပင့်ခဲ့သူလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ထို့အတူပါပဲ သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေ အမြင်မတော်တာတွေကိုလည်း ကာတွန်းတွေကတစ်ဆင့် ပညာရှိနည်းနဲ့ ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့သူပါ။ ပြောရရင် သူဟာ သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်မှာ အမြင်မတော်သမျှ အားလုံးကို ကာတွန်းတွေကတစ်ဆင့် ဆုံးမပဲ့ပြင်ခဲ့တာ၊ ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အစိုးရကိုလည်း မညှာပါဘူး၊ ပြည်သူတွေကိုလည်း ချန်မထားပါဘူး၊ ရဟန်းသံဃာလည်း မလွတ်ပါဘူး၊ အမျိုးသမီးလည်း ပါတာပါပဲ၊ ပြောရမယ်ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံး၊ လူသားအားလုံးရဲ့ မတော်တရော်တွေ၊ အမြင်မတော်တာတွေ အားလုံးကို ဆော်နှက်ခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့အထိ ကျွန်တော်တို့တွေ တလေးတစား ဖတ်နေရတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ အမှန်တရားဆိုတဲ့ နေရာကရပ်ပြီး ထောက်ပြဝေဖန်တဲ့လူဆိုတာ အတော်ကြီးကို ရှားသွားပါပြီ။ ဒီနေ့ခေတ် နာမည်ကြီး ကာတွန်းဆရာ အတော်များများဟာလည်း အစိုးရရယ်၊ စီးပွားရေးသမားတွေရယ်၊ စနစ်ကြီးရယ်ကို ဝေဖန်တာလောက်ပဲ အဓိကထားပြီး ရေးနေသားနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အင်း... ဒီနေ့ဒီအချိန်ကာလမှာ ဦးဘဂျမ်း ရှိသေးလျှင်ဖြင့်....။
ဆရာကြီး ဦးဘဂျမ်းကို ဒီပို့စ်နဲ့ ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ဟာ မြင်းထိန်းငတာ ဖြစ်နေလျှင်ဖြင့် နားလည်ပေးကြစေလိုကြောင်းပါ။ ဦးဘဂျမ်းရဲ့ ကာတွန်းလက်ရာအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်၊ စနေနေ့။
ည ၈ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 8:55 PM0Comment(s) Link This
Labels ကျွန်တော့်အတွေးများ, ကာတွန်း-Cartoon, မြန်မာ-Myanmar, နိုင်ငံရေး
ဟင်္သာငှက်များ မရှိသော ရေကန်သည် မတင့်တယ်။
လင်မရှိသော အမျိုးသမီးသည် မတင့်တယ်။
Posted by Ko Nyan Posted Time 3:08 PM0Comment(s) Link This
ကုန်းထွက်ပစ္စည်း ရေထွက်ပစ္စည်း ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်
အသေးအမွှားတွေပါမချန် တောက်တဲ့တစ်ကောင်တောင် မကျန်စေရ
ပါးစပ်ကလည်း မျိုချစရာ ဘာကျန်သေးလဲ တစ်မေးတည်းမေး
ဟာ....... မြစ်ကြီးတစ်စင်း ဘယ်လိုပျောက်သွားတာလဲ။
[၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် ရနံ့သစ်မဂ္ဂဇင်း မှ]
Posted by Ko Nyan Posted Time 10:26 PM 1 Comment(s) Link This
မကောင်းသော မိတ်ဆွေကို စကားမပြောဘဲနေခြင်းဖြင့် ဆုံးမရာ၏။
စည်းမစောင့်သော မယားကို စည်းစိမ်ဥစ္စာ မအပ်နှံဘဲထားခြင်းဖြင့် ဆုံးမရာ၏။
လောဘတကြီး စားသောက်တတ်သောသူကို မ၀ရေစာ ကျွေးထားခြင်းဖြင့် ဆုံးမရာ၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 6:45 AM0Comment(s) Link This
နှစ်ကျောင်း သုံးကျောင်း ပြောင်းပြီးသော ရဟန်း။
ကျော့ကွင်းမှ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် လွတ်ပြီးသောငှက်။
ဤသူတို့ကား မူရာမာယာ များတတ်ကုန်၏။
မျောက်ကလေးက လက်အငြိမ်မနေဘဲ ဟိုပစ်ဒီပစ် လျှောက်လုပ်တယ်။ လင်းယုန်ကြီးကလည်း ပါးစပ်က ပြောတော့သာ သံခင်းတမန်ခင်း၊ လက်တွေ့ကျတော့ ဒီလကုန်မှာ တိုက်ချင်းပစ် ပစ်ပြဦးမတဲ့။ အိမ်နီးချင်း ငှက်ကျားကလည်း မျောက်ကလေး အငြိမ်မနေတာသာ ကြည့်မရတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကျတော့ လင်းယုန်နဲ့ပေါင်းပြီး အတူပျံရတာနဲ့၊ အတူလေ့ကျင့်ရတာနဲ့၊ အတူရေငုပ်ရတာနဲ့....။ မျောက်ကလေး ဆွေ့ဆွေ့ခုန်မယ်ဆိုလည်း ခုန်လောက်ပါတယ်။ လင်းယုန်ကြီးရဲ့ ရန်သူတော်ဟောင်းကြီး ၀က်ဝံကြီးက အမျိုးတူ မျောက်ကလေးကို ဟန်ပြလောက်ပဲ အပြစ်တင်တယ်။ နဂါးကြီးကတော့ အကောင်းအဆိုး သိပ်ပြီးတော့ မပြောလှဘူး။ ဒါပေမယ့် မျောက်ကလေးအရေးမှာ ၀က်ဝံနဲ့ နဂါး သင့်သင့်မြတ်မြတ် ဖြစ်နေတာကတော့ အမှန်ပဲ။ မျောက်ကလေးရဲ့ရန်ဘက် ကြိုးကြာလေးခမျာလည်း မျောက်ကလေးကိုကြောက်ရ၊ လင်းယုန်နဲ့သင့်မြတ်အောင်လုပ်ရ၊ နဂါးကြီးနဲ့ ပဋိပက္ခတွေကလည်း သောင်တင်ရေမကျ။ အခုနောက်ဆုံး မျောက်ကလေး ဆော့လိုက်တဲ့ ခဲ ၄ လုံးကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွာကြီးတစ်ခုလုံး အုတ်အော်သောင်းနင်း၊ စိုးရိမ်တကြီး၊ စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။ မျောက်ကလေးက အစာရဖို့ လက်ဆော့တာလား၊ တမင်ရန်စတာလား၊ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်။ အနီးကပ်နေရတဲ့ ငှက်ကျားတို့ခမျာ မလုံခြုံ၊ မအေးချမ်းနိုင်တော့။ ကဲ... မျောက်ကလေးလက်ချက်နဲ့ လင်းယုန်ကြီးပဲ ကားယားကျမလား။ လင်းယုန်ကပဲ မျောက်ကလေးကို လက်သည်းနဲ့ ကုတ်သွားနိုင်မလား ဆိုတာကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရုံမှတစ်ပါး။
ငိုတာတွေ သိပ်ခေတ်စားနေပါ့လား။ ကိုဉာဏ်တောင် ငိုချင်စိတ်တွေ ပေါက်သွားမိတယ်။ သူ့ဟာသူ ငိုတဲ့ကိစ္စကို ကိုရွှေမြန်မာတွေ ဘာသာပြန်ကောင်းလိုက်ပုံက ဖတ်ရသူရင်ထဲ နင့်ခနဲဖြစ်ပြီး မျက်ရည်တွေ ပေါက်ပေါက်ကျသွားရတယ်။ တစ်ချိန်က လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီး အားပေးခဲ့ရတဲ့၊ သူ့ရဲ့ဟန်ပန်၊ သူ့ရဲ့ ကစားဟန်တွေကို အသည်းစွဲနှစ်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦးအနေနဲ့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေပေါ်မှာ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ မြေပုံညွှန်းပေးပြီး ကန်လိုက်သလား အောက်မေ့ရတဲ့ တိကျတဲ့ သူ့ရဲ့ဖြတ်တင်ဘောတွေကို ထပ်မံပြီး မြင်တွေ့ခွင့်မရှိတော့ဘူး၊ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး မင်းသားရှုံးလောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ကွင်းတွင်းပုံရိပ်တွေလည်း မြင်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သားသမီးတွေ တပြုံကြီးနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့။
အမှိုက်ကောက်ခွင့်မရတာကို ဘာကိစ္စ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး ရှဉ့်အ၀ှာကို အနာလုပ်နေကြသလဲ။ ကြားရတဲ့၊ ဖတ်ရတဲ့ သတင်းလေးအပေါ် သူများတွေ မှတ်ချက်ပြုတာတွေ၊ ဝေဖန်တာတွေလောက်ကို နားထောင်ပြီး ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားသုံးသပ်မှုမရှိဘဲ ဝေလေလေ လိုက်လုပ်တဲ့လူ သိပ်များတယ်။ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ဆိုတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ကောင်ကလည်း ကျုပ်ကို အကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီး မုန်းတဲ့လူတွေကို လေးစားတတ်တဲ့လူမျိုး။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်က ဆီလျော်တာ၊ မဆီလျော်တာကို ကျုပ်က စိတ်ကိုမ၀င်စားတာ။ အဲဒါက တစ်ဖက်လူရဲ့ ကိစ္စကိုး။ အဲ... သူများမုန်းလို့ ကျုပ်ကို လိုက်မုန်းတဲ့လူများတော့ ရွံလွန်းလို့ တံတွေးတောင် လှည့်မထွေးချင်ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်မဟုတ်ဘဲ သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်ရှူနေတဲ့လူတွေကို သိပ်မုန်းသပေါ့ဗျာ။ အမှိုက်ကောက်ခွင့်မရတာကို ဝေဖန်ကြတဲ့လူတွေကို မေးချင်တယ်။ သူများပြောတဲ့အတိုင်း ဝေလေလေ လိုက်ပြောတာလား၊ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီး ခံယူချက်အတိုင်း ဝေဖန်တာလား။ ဒီမယ်... ဦးကျော်သူ၊ ခင်ဗျားသာ အမှိုက်ကိစ္စကို တကယ်စေတနာရှိရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောစရာမလိုဘူး၊ ဘယ်သူ့ဆီကိုမှလည်း စာတင်စရာမလိုဘူး၊ ဘယ်သူ့ခွင့်ပြုချက်မှလည်း ရှိစရာမလိုဘူး။ ကျုပ်တို့ အဘိုးတွေ၊ အဘွားတွေ၊ အဘေးတွေ၊ အဖေတွေ၊ အမေတွေ လက်ထက်ကတည်းက လမ်းပေါ်မှာ အမြင်မတော်တဲ့အမှိုက် ဒီလိုပဲ ကောက်ပြီး သင့်လျော်ရာကို ပစ်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အခုမှပဲ အမှိုက်ကောက်တာကို အခမ်းအနားကြီး တစ်ခုလိုလုပ်၊ မီဒီယာတွေထက်မှာဖော်ပြ၊ နာမည်ကြီးလူတွေစု၊ အမလေးဗျာ... သေသွားတဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေ တမလွန်ကနေ ဒီသတင်းကြားရင် အူတက်ပြီး နှစ်ခါပြန် ထပ်သေကြကုန်ပါဦးမယ်။ ခင်ဗျားတို့ဟာက အမှိုက်ကောက်ချင်တာက နည်းနည်း၊ လူစုစုနဲ့ အင်အားပြချင်တာ၊ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြချင်တာ၊ လူအာရုံစိုက်ခံချင်တာ၊ သူရဲကောင်းအထင်ခံချင်တာ၊ လက်ရှိအစိုးရကို ကျရာနေရာကနေ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်အနေနဲ့ နှောင့်ယှက်ချင်တာ၊ အခက်ရစေချင်တာက ပိုနေတယ်လို့ ထင်တာပဲဗျာ။ ဦးကျော်သူတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်ရင်း လမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ အမှိုက်တွေကိုကောက်၊ အမှိုက်ပုံးထဲမှာ လွှင့်ပစ်လိုက်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က အရေးယူတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားအစား ကျုပ်အရေးယူခံမယ်ဗျာ။ ကျုပ်တို့လည်း ဒီလိုပဲ လမ်းပေါ်မှာ အမြင်မတော်တဲ့ အမှိုက်တွေ့ရင်၊ သစ်ကိုင်းခြောက်တွေ့ရင်၊ ခွေးသေကောင်တွေ့ရင် တတ်နိုင်သလောက် ဖယ်ရှားပစ်နေတာပါပဲ။ ဘယ်သူကမျှ ကျုပ်ကိုလာပြီး ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အမှိုက်ကောက်တယ်လို့ ပုဒ်မမတပ်ပါဘူး။ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ ကျုပ်က ဘာအရောင်မှမပါဘဲ လုပ်ခဲ့တာကိုး။ ငယ်ငယ်ကတည်းက သဘောကျခဲ့ရတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အများကြီး ချစ်ခင်တယ်၊ လေးစားတယ်၊ သဘောကျတယ်။ နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ဦးဆောင်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ လုံးဝကို လေးစားတယ်၊ ဦးညွတ်တယ်၊ အားကျတယ်၊ သာဓုခေါ်တယ်၊ ချီးကျူးတယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီလိုအလုပ်ကို မလုပ်ဝံ့ပါဘူး၊ မလုပ်ရဲသေးပါဘူး၊ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ၀န်ခံပါတယ်။ သို့သော် ပရဟိတဘန်းပြပြီး နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်တာလိုလို၊ အရောင်ဆိုးတာလိုလို လုပ်လာရင်တော့ ဆောရီးပဲ ဦးကျော်သူ။ ဝေဖန်စရာရှိတာ ဝေဖန်ရမှာပဲ။ ကောင်းမွန်တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ပဲ ကုသိုလ်တွေယူစမ်းပါလို့ အကြံပေးပါရစေ ဦးကျော်သူ။ ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်တောင် စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်တတ်ဘဲ၊ လမ်းပေါ်မှာ အမှိုက်တွေ့ရင်တောင် အသိစိတ်နဲ့ မကောက်တတ်ဘဲ၊ လူအများကြီးစုပြီးမှ၊ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီးမှ၊ ဂျာနယ်ထက်မှာသတင်းပါမှ၊ ဓာတ်ပုံတွေတဖျတ်ဖျတ်ရိုက်မှ အမှိုက်ကောက်တတ်တဲ့လူတွေကို ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်က ထွေးပြီးသား တံတွေးထက်တောင် ရွံပါသေးသဗျာ။
ဟိုသင်္ကန်းဝတ်ကလည်း အင်တာနက်မှာ သူ့အကြောင်းကို အမြဲတမ်းပြောစေချင်သလား မပြောတတ်ဘူး။ တစ်နေ့တစ်မျိုး လုံးဝကို မရိုးရဘူး။ သင်္ကန်းမ၀တ်ခိုင်းဘဲ တောင်ရှည်ပုဆိုး၊ တိုက်ပုံ၊ ခေါင်းပေါင်း ၀တ်ဆင်ပေးပြီး သမ္မတသာ တစ်ခါတည်း ခန့်လိုက်ချင်တော့တယ်။ သူများတွေ ကုလားနဲ့ပေါင်းရင် အဲဒါ ဆွဲဆောင်ခံရတာ၊ စည်းရုံးခံရတာ၊ ကိုယ်ခံအားမကောင်းတာ။ သူကိုယ်တိုင် ကုလားတွေနဲ့ ဖက်လဲတကင်း နေတယ်ဆိုတာ ပညာရှင်ပီသတာ၊ သံခင်းတမန်ခင်း ကျွမ်းကျင်တာ၊ လိုအပ်လို့လုပ်နေတာ၊ ဒီလိုမျိုးလား။ တင်သမျှသတင်းကလည်း မှုခင်းသတင်းဂျာနယ်တောင် လက်မှိုင်ချရလောက်တယ်။ သမ္မတကြီးဆီကိုတောင် သူ့ဆီလောက် တိုင်စာရောက်မယ်မထင်ဘူး။ အင်း... ကိုယ်တော်... ကိုယ်တော်... ကုလားတွေကို မြန်မာတွေလက်ခံတာ၊ လက်မခံတာတော့ တပည့်တော် သေချာမသိဘူး။ ကိုယ်တော့်ကိုကြည့်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြားလူတွေ အထင်အမြင်သေးကြရင်တော့ အင်း..... ရင်လေးဖွယ်ပါပဲဘုရား...။
၀တွေက ပြည်နယ်တောင်းတယ်တဲ့။ တောင်းပေ့စေပေါ့။ တောင်းတာက သူတို့အလုပ်ပဲ။ မကျေနပ်ရင် အခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်း လိုက်တောင်းကြပေါ့။ တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဖြစ်တာမဖြစ်တာကတော့ အဲဒီဒေသမှာနေတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားချက်တွေအရကိုး။ အခုဗျာ... ၀က ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်အဖြစ် ထူထောင်ချင်တယ်မလား။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အရေးကိစ္စဗျ။ ကျန်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေ၊ ပြည်နယ်တွေက ပြည်သူတွေမှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ဒီလိုပြောလို့ မကျေနပ်ရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြန်ဖတ်၊ ပြန်လေ့လာပေါ့။ ရှမ်းတွေကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလား ၀ပြည်နယ် ဖြစ်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီး ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြရင်တောင် ကိစ္စက မပြီးသေးဘူးဗျ။ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ထပ်ပြီးတော့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရဦးမယ်။ အဲဒီလို ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်းရဲ့ လေးပုံသုံးပုံနှင့်အထက် ထောက်ခံဆန္ဒမဲရမှ သမ္မတက ပြင်ပေးမှာဗျ။ သေသေချာချာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး လေးပုံသုံးပုံနှင့်အထက်။ ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဗျာ... သူများယောင်တိုင်း လိုက်မယောင်ပါနဲ့လို့။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တဲ့(ဒဲ့)ပြောရမလားဗျ။ ကြိုက်တဲ့ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကြိုက်တဲ့လူတွေက ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်တောင်းကြ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ရင် (သဘောကတော့ ကာချုပ်သဘောမတူရင်) အဲဒီကိစ္စ ဖြစ်လာစရာအကြောင်း တစ်စက်မျှကို မရှိဘူးဗျို့။ လေးပုံသုံးပုံနှင့်အထက်ဆိုတာ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်စေ ထောက်ခံဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်တော့ နားလည်မိပါသဗျို့။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ ဂျာနယ်တွေဖွတိုင်း၊ ငါးစာချတဲ့လူတွေ မျှားတိုင်း သိပ်ပြီးတော့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မဖြစ်စမ်းပါနဲ့ဗျာ။ ဒီခေတ်က ပညာခေတ်ဗျ။ အရာရာကို ပညာနဲ့စဉ်းစား၊ ပညာနဲ့ဆင်ခြင်၊ ပညာနဲ့...........။ ကျွန်တော့်သဘောလား။ ပြောစရာအကြောင်း တစ်စက်မျှကို မရှိဘူး။ ကျွန်တော်က ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမဟုတ်သလို၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်း နေတဲ့လူ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ နှာစေးနေလိုက်တာ ပိုမကောင်းဘူးလား။
ခေါင်းစဉ်ကတော့ ဘယ်ရယ်မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ရူးပေါက်ပြီး ပေးလိုက်တာ။ ဂျာနယ်တွေ အဖတ်များတော့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ လုပ်စားတတ်ကြတာကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့။ အဓိပ္ပါယ်ရှိတာ၊ မရှိတာ၊ ဆီလျော်တာ၊ မဆီလျော်တာ အသာထား။ လောလောဆယ် ကျွန်တော်ရေးတဲ့ပို့စ်ကို လူစိတ်ဝင်စားပြီး ပေါက်ဖို့က အဓိက မဟုတ်လား။ ခက်တာက ကျွန်တော်က အကြော်လည်းမကြော်တတ်၊ လဲလဲလဲလဲလဲဆိုပြီး သီချင်းလည်း မဆိုတတ်၊ ဆိုင်းမပါဗုံမပါနဲ့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆိုတာကို သီချင်းလုပ်ပြီးလည်း မဆိုတတ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် မတောက်တခေါက်တတ်တဲ့ ရေးသားနည်းလေးတွေနဲ့ ပေါက်အောင်လုပ်ရတာကို နားလည်ပေးဗျာ။ နားမလည်ပေးရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်က ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၁ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၅၄ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 3:01 PM 1 Comment(s) Link This
Labels ကျွန်တော့်အတွေးများ, ကိုယ်တွေ့, မြန်မာ-Myanmar, သတင်း-News, နိုင်ငံရေး
စစ်သူရဲကောင်းကို တိုက်ပွဲမှ အောင်ပွဲရ၍ ပြန်လာခါမှ ချီးမွမ်းရာ၏။
ကောက်ပဲသီးနှံကို အိမ်ထဲကျီထဲရောက်မှ ချီးမွမ်းရာ၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 10:27 AM0Comment(s) Link This
ရဟန်းသည် တရား၌ မွေ့လျော်၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 12:56 PM0Comment(s) Link This
လက်ဖြောင့်လှသော လေးသမားသည် ခုနစ်ရက်တာမျှ လေးနှင့် ကင်းကွာလျှင် ပျက်စီးသွား၏။
သစ္စာရှိလှသော မယားသည် တစ်လတာမျှ လင်နှင့် ကင်းကွာသွားလျှင် ပျက်စီးသွား၏။
လိမ္မာလှသော တပည့်သည် လ၀က်တာမျှ ဆရာနှင့် ကင်းကွာလျှင် ပျက်စီး၏။
“ရွှေပြည်မိုး” လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၏ နံနက်ခင်းတစ်ခု။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဂျာနယ်ကို သဲကြီးမဲကြီး ငုံ့ဖတ်နေသည်။ ကျွန်တော်ထိုင်နေသော စားပွဲသို့ လူနှစ်ယောက် လာပြီးထိုင်သည်။ စကားသံကြား၍ ဂျာနယ်ကို ဖတ်နေရင်း အကဲခတ်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်စလုံးက အားကစားဝတ်စုံကိုယ်စီနှင့် မန္တလေးကျုံးနံဘေး လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်လာကြသူများ ဖြစ်မည်ထင်သည်။
တစ်ယောက်က အသက်ကြီးကြီး မြန်မာအမျိုးသား၊ ကျန်တစ်ယောက်က တရုတ်လူမျိုး အဘိုးအို။
သူက “ကန်းစွန်းတစ်ခင်း ပေးမယ်၊ ဘာ လုပ်မလဲ” ဟု မြန်မာသံ မပီမသဖြင့် မေးသည်။ သူ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားသွားသည်။ ကျန်တစ်ယောက်က ပြုံးပြီးဖြေသည်။
“ကန်စွန်းတစ်ခင်းပေးရင် … လွယ်လွယ်လေးပါ။ ကန်စွန်းရွက်ခူးပြီး ငါးစည်းကို တစ်ရာနဲ့ ဈေးမှာ ရောင်းစားမယ်ဗျာ၊ ဘာခက်တာမှတ်လို့”
“အီဒါပဲဗျ၊ ခီများတို့က ကန်စွန်းရွက်ကို ခူးပြီးရောင်းစားမယ်၊ ဒါပဲသိလယ်။ ငေါ်ကတော့ အဲဒီကီစွန်းရွက်ကို ကီစွန်းရွက်ကြောလုပ်ပြီး ငွေရှာမယ်။ ခီများတို့က တက်တာဖို့ပဲ စဉ်းစားတယ်၊ တူးတက်ဖို့ မီစဉ်းစားဘူး”
ထိုသို့ အခြေအတင် စကားတွေပြောပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ထသွားကြသည်။
ကျွန်တော်ဖတ်နေသော ဂျာနယ်ထဲတွင် မန္တလေးမြို့အတွက် မင်္ဂလာအိမ်ရာစီမံကိန်းအကြောင်း၊ တံတားဦးလေဆိပ်ကို ဒီထက် အဆင့်မြှင့်တင်မည့်အကြောင်း၊ ဟိုတယ်ဇုန်များ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မည့်အကြောင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံခြားငွေ တိုးချဲ့ရှာနိုင်မည့် နည်းလမ်းများအကြောင်းကို ဖတ်ရင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ဆက်ပြီးထိုင်နေမိသည်။
နာရီကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ၈နာရီကျော်ပြီ၊ ဆိုင်မှာလည်း လူစုံလာသည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုဝင်းမြင့် ရောက်လာသည်။ သူက Acid Man အမည်ဖြင့် စာရေးသည်။ Spider Man, Bat Man ကိုအားကျပြီး Acid Man ဟု အမည်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လွဲရင်ချော်ရင် သရော်မယ်ဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်မျိုးပေါ့။ သူက သူ့သမီး “ပိစိ” ကို ဒေါ်မမနိုင်၏ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းတွင် အပ်နှံထားသည်။ သင်တန်းက ၁၀နာရီမှ ဆင်းမည်။ သူ့သမီးကိုစောင့်ရင်း “ရွှေပြည်မိုး” လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့ကို ကျွန်တော်နှင့် အတူထိုင်ဖို့ လှမ်းပြီးခေါ်လိုက်သည်။
“လာဗျာ။ လက်ဖက်ရည် သောက်ဦး၊ ဘာစားမလဲ”
သူစားနေစဉ် ကျွန်တော်က မေးခွန်းတစ်ခု မေးလိုက်သည်။
“ခင်ဗျားကို ကန်စွန်းတစ်ခင်း ပေးထားမယ်။ ခင်ဗျား အဲဒီကန်စွန်းခင်းကို ဘာလုပ်မလဲ”
“ခင်ဗျားမေးခွန်းကလည်း ဘာခက်တာမှတ်လို့၊ ကန်စွန်းတစ်ခင်းပေးရင် ကန်စွန်းရွက်ကို ခူးမယ်၊ အစည်းလေးတွေလုပ်မယ်၊ ပြီးရင် တစ်စည်းကို တစ်ဆယ်ဗျာ၊ တစ်ရာဖိုးကို ဆယ့်ငါးစည်းပေးမယ်။ ဟဲ…ဟဲ…ဟဲ”
“ဒါဆိုရင်ဗျာ၊ ခင်ဗျားကို မန္တလေးမြို့ကြီးပေးမယ်၊ ခင်ဗျားဘာလုပ်မလဲ”
“ဒါလေးများ၊ ခက်တာမှတ်လို့၊ ကျုပ်ကို မန္တလေးမြို့ကြီး တကယ်ပေးမယ်ဆိုရင် မြေတွေကို တစ်ကွက်ပြီးတစ်ကွက် ရောင်းစားမှာပေါ့”
သူ့အဖြေကြောင့် ကျွန်တော်စိတ်ပျက်မိသည်။ ဒါမြန်မာ့အတွေးပဲ၊ ဒါမန္တလေးသား အတွေးပဲ၊ ကျွန်တော်တို့က ဖောက်ထွက်ပြီး မတွေးဘူး၊ ဖြန့်ထွက်ပြီး မတွေးဘူး၊ ပြောင်းပြန်မတွေးဘူး၊ အတွေးမရဲဘူး၊ အတွေးရိုးတယ်။
“အတွေးရိုး” တော့ “သွေးမိုး” ခံရတာပေါ့။
“ကိုဝင်းမြင့်ရယ်၊ ကျုပ်ကို မန္တလေးမြို့ကြီး ပေးစမ်းပါ။ ကျုပ်ဘာလုပ်မယ်ထင်လဲ၊ ခင်ဗျားလိုတော့ မြေကွက်တွေကို ရောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူး”
“ဆရာဘုန်း၊ ဒါဆို ခင်ဗျားက ဘာလုပ်မလဲ”
“ကဲ…. ဟိုမယ်ကြည့်၊ မန္တလေးကျုံးတော်ကြီး၊ ဘယ်လောက် လှသလဲ၊ ရေပြင်စိမ်းစိမ်း ရှိတယ်ဗျာ။ မြောက်ဘက်မှာ စိမ်းစိုနေတဲ့ မန္တလေးတောင်တော်ကြီး ရှိတယ်ဗျာ၊ အရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်လည်း ရန်ကင်းတောင်ကြီး၊ သိပ်လှတဲ့ ကျုံးမြို့ရိုးနဲ့ မန္တလေးနန်းတော်ကြီးဗျ။ မြို့တစ်မြို့မှာ ရေတွေ၊ အင်းတွေ၊ အိုင်တွေ၊ တောင်တွေ၊ တောတွေပါတာ ကမ္ဘာပေါ်ရှားတယ်ဗျ၊ ကျုပ်တို့ မန္တလေးက အရှားအပါးဆုံး အလှအပကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နတ်မိမယ်ရဲ့ မျက်ဝန်းဗျ”
“ကျုပ် အိန္ဒိယနိုင်ငံက “တပ်ခ်ျမဟာ ဂူဗိမာန်” ရောက်ဖူးတယ်။ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ပြီး သမိုင်းလုပ်ထားတယ်။ “တပ်ခ်ျမဟာ” နဲ့ ကပ်လျက်မှာ ရေမဲ့ သောင်ထွန်းနေတဲ့ “ယမုံနာ မြစ်သေကြီး” ရှိတယ်။ မနီးမဝေးမှာလည်း “အာဂရာ” ဆိုတဲ့ နန်းတော်ကြီးရှိတယ်။ ကျုပ်တို့ မန္တလေးကျုံးတော်ကြီးလောက် မလှဘူး၊ တောင်မရှိဘူး၊ တောမရှိဘူး၊ ရေမရှိဘူးဗျာ။ အဲဒီ “အာဂရာ” ဆိုတဲ့ နန်းတော်ကြီးထဲကို ပိုက်ဆံပေးပြီးမှ ဝင်ကြည့်ခွင့်ရတယ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဆိုရင်တော့ အိန္ဒိယ ၅ ရူပီး ပေးရတယ်။ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုရင် အခမဲ့၊ နိုင်ငံခြားသား ဆိုရင်တော့ အိန္ဒိယရူပီး ၁၀၀ ပေးရတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ မန္တလေးကျုံးတော်ကြီးနဲ့ နန်းတော်ကြီးကို ကျုပ်က သပ်သပ်ရပ်ရပ် မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ အိတ်ထောင်ထဲက ပိုက်ဆံကို ရအောင်ယူချင်တာဗျ”
“ကဲ… ဆိုစမ်းပါဦးဗျာ။ ခင်ဗျားကို မန္တလေးမြို့ကြီး ပေးပါပြီတဲ့။ ဘာလုပ်မလဲ”
ကိုဝင်းမြင့်က မခို့တရို့ပြုံးပြီး ကျွန်တော့်ကို ရန်စသလို မေးခွန်းမေးသည်။
“ပထမဆုံးဗျာ၊ နန်းတော်ထဲမှာ ရှိတဲ့ စစ်တပ်ကြီးကို ရန်ကင်းတောင်ခြေ၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်တော်တဲ့ တစ်နေရာကို ရွှေ့မယ်၊ တပ်မတော်သားတွေအတွက် နေစရာ လိုင်းခန်းတွေကိုလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဆောက်ပေးမယ်။ နန်းတော်ထဲမှာ စစ်တပ်ကြီး မရှိတော့ဘူးဆိုရင် “ရတနာပုံ မင်းနေပြည်ခေတ်” အတိုင်း နန်းတော်အတွင်းကို ပြုပြင်မယ်။ မွမ်းမံမယ်၊ “မြနန်းစံကျော်ရွှေ နန်းတော်ကြီး” ကို ဒီထက် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်အောင် လုပ်မယ်။ မြင်းတပ်တွေ၊ ဆင်တပ်တွေ ထားမယ်။ ရှေးတုန်းက မြန်မာအမျိုးသမီးကြီးများ၊ မြန်မာအမျိုးသားကြီးများ ဝတ်စားဆင်ယင်သလိုမျိုး ဖန်တီးထားမယ်။ သျှောင်ထုံးကြီးတွေ ထုံး၊ ထိုးကွင်းမင်ကြောင် ထိုးထားတဲ့ အမျိုးသားတွေ၊ ညနေပိုင်းဆိုရင် “ဝိုင်းခြင်း” တွေ ခတ်ကြမယ်ဗျာ။ ပြောင်းဖူးဖက် ဆေးလိပ်ကြီးကိုဖွာပြီး “ဝိုင်းခြင်း” ခတ်နေတာကို ကြည့်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ ဖန်တီးထားမယ်၊ ပြီးတော့ သစ်သားဘီးတပ် နွားလှည်းကြီးတွေ၊ ရထားလုံးတွေ လုပ်မယ်၊ နန်းတော်ထဲကိုလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပြစားမယ်။ Taxi ဆွဲစားမယ်။ နန်းတော်ထဲကို အင်ဂျင်တပ် မီးခိုးထွက် ဘယ်မော်တော်ကားမှ ဝင်ခွင့်မပေးဘူး၊ ဒီနန်းတော်ကြီးထဲ ရောက်လိုက်တာနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကို ပြန်ရောက်သွားသလိုမျိုး ခံစားစေရမယ်။ အဲဒီခေတ် အခင်းအကျင်းမျိုးကို ပြထားမယ်ဗျာ”
ကိုဝင်းမြင့်က မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုသော အကြည့်ဖြင့် ကျွန်တော့်စကားကို သည်းခံပြီး နားထောင်ပေးနေသည်။
“ကဲ…. ဆိုစမ်းပါဦး ဆရာဘုန်းရဲ့၊ ဒါပဲလား”
“ဒါတင် ဘယ်ကမလဲဗျ၊ နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ဥယျာဉ်ကြီး လုပ်ပစ်မယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းတွေ စိုက်မယ်ဗျာ။ နန်းတော်ထဲမှာ အရိပ်ရတဲ့ မန်ကျည်းပင်တွေ၊ ကုက္ကိုပင်တွေဆိုတာ အများကြီးပဲ။ ပြီးတော့ နန်းတော်ရဲ့ သင့်တော်တဲ့ နေရာတွေမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ ကျေးရွာပုံစံတွေ ဖန်တီးထားမယ်။ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာအဝတ်အထည်တွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြထားမယ်။ ရောင်းချမယ်။ ရိုးရာပစ္စည်းတွေ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ပုံကိုလည်း လေ့လာနိုင်ဖို့ ဖန်တီးထားဦးမယ်။ ပြီးတော့ ရိုးရာအစားအစာတွေကိုလည်း ရောင်းချမယ်၊ စားသောက်စေမယ်”
ကျွန်တော်က မန္တလေးကျုံးတော်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ခံစားချက်အပြည့်ဖြင့် ပြောသည်။ ကိုဝင်းမြင့်က စိတ်မဝင်စားပါ။
“ခင်းဗျားစိတ်ကူးက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဆရာဘုန်းရဲ့”
“စိတ်ကူးပဲဗျာ၊ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ဖြစ်ရမှာပေါ့၊ အဲဒီ နန်းတော်ကြီးထဲမှာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ ရောင်းမယ်၊ ကျောက်ဆစ် ထုလုပ်တဲ့ ဈေးတန်းတွေထားမယ်၊ ကြေးသွန်းလုပ်တဲ့ ဈေးတန်းတွေထားမယ်၊ ရွှေချည်ထိုး ငွေချည်ထိုး၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ပြထားမယ်။ စည်းကမ်းတကျပေါ့ဗျာ၊ နန်းတော်ကြီးထဲကို တစ်ရက်လောက် ဝင်ကြည့်ရုံနဲ့ ကြည့်လို့မဝအောင် လုပ်ထားမယ်။ အနည်းဆုံး မန္တလေးနန်းတော်ကြီးကို ၃၊ ၄ ရက်လောက် ဝင်ပြီးလေ့လာမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားတွေ ကျုပ်က လုပ်ချင်တာ၊ ပြီးတော့ဗျာ “မြေဝိုင်းဇာတ်” တွေ ကမယ်။ ရေနံချေး မီးတိုင်တွေရဲ့ အလယ်မှာ ဖျာချောကို ခင်းပြီး နားထောင်ကြမယ်။ ညဘက်ဆိုရင် လျှပ်စစ်မီးရောင် မှိန်မှိန် ထွန်းပေးထားမယ်။ စောင်းတီး ပညာရှင်တွေကို နေရာပေးမယ်။ ရှေးသီချင်းကြီး၊ သီချင်းခန့်တွေကို သီဆိုကြမယ်။ “ဦးပုည” တို့၊ “အချုပ်တန်း ဆရာဖေ” တို့ရဲ့ စာတွေ၊ ကဗျာတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်မယ်၊ သူတို့စာပေတွေကို အင်္ဂလိပ်လို၊ ပြင်သစ်လို၊ ဂျပန်လို ဘာသာပြန်ပြမယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ အလွန်အင်မတန် စိတ်ဝင်စားမှာဗျ”
“ဒါတင် ဘယ်ကမလဲဗျာ၊ Special Day တွေ၊ Special Month တွေ၊ Special Season တွေ လုပ်မယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဆွဲဆောင်မယ်။ နန်းဝတ်နန်းစားနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ပိုက်ဆံပေးရမယ်၊ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ရင်လည်း ပိုက်ဆံယူမယ်။ ပြီးတော့ “မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီး” တွေ ထားမယ်။ နတ်ဖိုသံတွေ တီးမယ်။ မှုတ်မယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေဆိုတော့ လမ်းကျယ်ကျယ်ကြီးတွေ၊ တိုက်မြင့်မြင့်ကြီးတွေ၊ အုတ်နဲ့ ဘိလပ်မြေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြို့ပြဆန်ဆန် မြင်ကွင်းတွေကို မကြည့်ချင်ကြဘူး၊ သူတို့ မျက်စိထဲမှာ ရိုးအီနေပြီ၊ မထူးဆန်းတော့ဘူး၊ မြန်မာဆိုတာ ဒီလို နေခဲ့တယ်။ ဒီလိုယဉ်ကျေးမှု ရှိခဲ့တယ်၊ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သူတို့ကို ပြလိုက်ချင်တယ်။ သူတို့က အဲဒါမျိုးမှ စိတ်ဝင်စားတာ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တွေ့တိုင်း သူတို့ အမြဲပြောတဲ့ သူတို့ အမြင်တွေ ရှိတယ်ဗျ”
“မင်းတို့ဆီက ဟိုတယ်ကြီးတွေဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတယ်ကွ၊ ငါတို့ မျက်လုံးထဲမှာ သိပ်မဆန်းဘူး။ ငါတို့ မျက်လုံးထဲကို မင်းတို့ဝင်ကြည့်။ ငါတို့က ဒေသတစ်ခုကိုရောက်ရင် အဲဒီဒေသရဲ့ မူရင်းအတိုင်း မပျက်စီးသေးတဲ့ သဘာဝကို ကြည့်ချင်တာ။ မင်းတို့ နန်းတော်ကြီးကို ရှေးမူအတိုင်း လုပ်လိုက်စမ်းပါကွာ။ မင်းတို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်၊ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်က နိုင်ငံတစ်ခုကို အလည်အပတ်သွားရင် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ လောက် အနည်းဆုံး သုံးရတယ်။ နိုင်ငံခြားသား တစ်သန်း အလည်အပတ်လာရင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀၀ ရမယ်ကွာ။ ယိုးဒယားကိုလာတဲ့ နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တိုင်း မြန်မာပြည်ကို လာချင်ကြတဲ့ သူတွေချည်းပဲ။ ယိုးဒယားမှာဆိုရင် ယိုးဒယားပြည်ဝင်ခွင့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာ ၄၀ ကောက်ခံတယ်။ တစ်နှစ်ကို နိုင်ငံခြားသား ၁၅သန်း လာပြီး လည်ပတ်သတဲ့။ အဲဒီဝင်ငွေကိုက မနည်းမနောပဲ။ သူတို့တိုင်းပြည် သယံဇာတ အရင်းအမြစ်တွေ မပျက်စီးဘဲ တိုးတက်နေတာ အဲဒါကြောင့်ကွ။ သူတို့ထက် မင်းတို့တိုင်းပြည်က အများကြီး သာပါတယ်။ သူတို့ ဧည့်သည်တွေကို မင်းတို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ရင် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်တွေကို ထိန်းသိမ်းရာရောက်မယ်။ ဝင်ငွေလည်းရမယ်။ အခုလက်ရှိ မပျက်စီးဘဲ ကျန်ရှိနေတဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်နဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ နေရာတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်မယ်။ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ တိုးလာနိုင်တယ်။ မင်းတို့က ရွှေခွက်နဲ့ ခြေဆေးနေတဲ့လူမျိုး”
“ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်။ ရွှေခွက်နဲ့ ခြေဆေးနေတယ် ဟုတ်လား။ ဘာသဘောလဲဗျ”
“ရွှေခွက်နဲ့ ခြေဆေးတယ်ဆိုလို့ အထင်ကြီးပြီး ပြောတာမထင်နဲ့၊ ရွှေခွက်ကို တန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးလို့ ပြောတာဗျ၊ ခြေဆေးတဲ့ခွက်ကို ဘယ်သူက တန်ဖိုးထားလို့လဲ။ ကိုယ့်တန်ဖိုး ကိုယ်မသိတဲ့ လူမျိုးလို့ ပြောတာဗျ”
“သူတို့ကပြောတယ်။ မင်းတို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ရှာလို့ရနိုင်တဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ သဘာဝဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်တွေ အများကြီးပဲတဲ့၊ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြုပြင်လိုက်ရင် အာရှမှာ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် အလာဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ နိုင်ငံခြားသား ဆယ်သန်းလောက် လာလို့ကတော့ မင်းတို့ နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေ မင်းတို့ တွက်ကြည့်ကွာတဲ့၊ မင်းတို့လုပ်ရင် ဖြစ်မှာပါတဲ့”
ကိုဝင်းမြင့်က သူ့ထုံးစံအတိုင်း သရော်တော်တော် မျက်လုံးပြူးကြီးဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ကြည့်သည်။
“နန်းမြို့ရိုးနဲ့ ကျုံးတော်ကြီးရဲ့အကြားမှာလည်း ပန်းခြံတွေ လုပ်မယ်ဗျာ။ ကျွန်တာ့်တို့ မန္တလေးမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ရုပ်ထုတွေ ထားမယ်ဗျာ။ “နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်” တို့၊ “မြို့မငြိမ်း” တို့၊ "စိန်ဗေဒါ” တို့၊ “လေဘာတီမမြရင်” တို့၊ ပြီးတော့ စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်မယ်ဗျာ၊ ရိုးရာနဲ့ အနောက်တိုင်း တူရိယာကို လိုက်ဖက်ညီအောင် တွဲဖက်ပြီး တီးခတ်နိုင်တဲ့ “မြို့မ” တေးဂီတကို ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေ ညတိုင်း ကျင်းပမယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ညဈေးတန်းကြီးတွေ၊ Night Bazaar တွေ၊ မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာ သုံးလေးနေရာလောက် ဖန်တီးမယ်ဗျာ”
နားထောင်နေသော ကိုဝင်းမြင့် ပျော်မပျော်တော့ ကျွန်တော်မသိ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကူးဖြင့် ကိုယ်ပြောနေရင်း ပျော်လာမိသည်။
“နန်းတော်ကြီးထဲမှာလည်းဗျာ ….. “ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်” ရဲ့ပြတိုက်၊ “ကင်းဝန်မင်းကြီး” ရဲ့ပြတိုက်၊ “တိုင်တားမင်းကြီး” ရဲ့ပြတိုက်၊ “လှေသင်း အတွင်းဝန်မင်းကြီး” ရဲ့ပြတိုက်၊ “စာဆိုဦးပုည” ရဲ့ပြတိုက်၊ “မင်းတုန်းမင်း” တို့၊ “ကနောင်မင်း” တို့၊ “သီပေါမင်း” တို့ရဲ့ပြတိုက်တွေ လုပ်ချင်တယ်ဗျာ။ မန္တလေးနန်းတော်ကြီး တည်ဆောက်တုန်းက သမိုင်း အထောက်အထားတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး အယူအဆတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ပြတိုက်တွေလည်း လုပ်ချင်တယ်ဗျာ။ မန္တလေးနန်းတော်ကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ လူသိနည်းတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရှင်ကြီး “ပန်းပဲမင်းကြီး ဦးမှို”… သူတို့ သူတို့ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကို ခေတ်မီ ဆော့ဖ်ဝဲတွေနဲ့ ဆလိုက်ထိုးပြီး ပြမယ်။ နန်းတော်ကြီးရဲ့ အပြင်ဘက်မှာလည်း စင်္ကာပူလို ရေပန်းဆလိုက်ထိုး ဥယျာဉ်ကြီး လုပ်မယ်။”
“ဆရာဘုန်း.... ခင်ဗျား တော်တော် စိတ်ကူးယဉ်တဲ့လူပဲ”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ၊ ကျုပ် စိတ်ကူးထားတာ ရှိသေးတယ်။ သီပေါမင်းနဲ့ ဒိုင်းခင်ခင်တို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို အင်္ဂလိပ် အသံထွက်ပြဇာတ် ကမယ်ဗျာ။ ကနောင်မင်းသားကြီးနဲ့ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်တို့ရဲ့ နှလုံးသား ပုံရိပ်ကိုလည်း ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ပြီး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မယ်ဗျာ။ ဒီလိုပဲဗျ၊ ရတနာပုံခေတ်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေလုပ်ပြီး ဂန္တဝင်မြောက် တင်ဆက်ပွဲတွေ ကျင်းပမယ်ဗျာ”
“ဆရာဘုန်း၊ ခင်ဗျားစိတ်ကူးက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဗျ၊ မဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးကို ရူးတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်”
ကိုဝင်းမြင့်က ကျွန်တော်ကို သာသာနှင့်နာနာ နှက်သည်။
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဝင်းမြင့်ရာ၊ ခင်ဗျားပဲ စဉ်းစားကြည့်၊ ခိုင်မာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းလည်း မရှိ၊ မြေကျယ်ကျယ်လည်း မရှိ၊ လူသားအရင်းအမြစ်လည်း မရှိ၊ အင်္ဂတေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အရုပ်တွေကို ပြပြီး ဝင်ငွေရှာတတ်တဲ့ စင်္ကာပူကို ကျုပ်တို့ အတုယူသင့်တယ်။ သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေက စိတ်ကူးကောင်းတယ်ဗျ။ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာလည်း စေတနာ ရှိတယ်။ အနာဂတ်ကိုလည်း လှပအောင် အသိပညာနဲ့ ဆေးခြယ်တတ်တယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို တကယ်ချစ်တယ်ဗျ”
“နို့ …. နေပါဦး ဆရာဘုန်းရဲ့၊ ကျုပ်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေကရော ကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုယ် မချစ်လို့လား”
"မချစ်ဘူးလို့တော့ မပြောရဲပါဘူးဗျာ၊ မချစ်တတ်ဘူးလို့တော့ ပြောရဲတယ်။ ဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ မချစ်တတ်ဘူးဗျ၊ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့တော့ ချစ်တတ်တယ်။ လုံခြုံရေးအမြင်နဲ့ပဲ ချစ်တတ်တယ်။ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်က တိုးတက်ဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးပါ။"
“ဒါတောင်မှ နန်းတော်ကြီးနဲ့ ကျုံးမြို့ရိုးပေါ်မှာ တွေးမိတဲ့ စိတ်ကူးနော်၊ ဧရာဝတီတာရိုးပေါ်က ကားလမ်းမကြီးကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်မယ်။ ပြီးတော့ ဧရာဝတီမြစ်အလှကို ပြစားမယ်ဆိုရင်လည်း ရသေးတယ်။ “ဦးပိန်တံတား” တို့၊ “မဟာဂန္ဓာရုံ” တို့၊ “မစိုးရိမ်တိုက်ဟောင်း” တို့၊ “မဟာမုနိဘုရားကြီး”တို့၊ “အိမ်တော်ရာဘုရား”တို့ စုံလို့ပါပဲ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ပြီး ဝင်ငွေရှာလို့ရတယ်။ “ပုဂံ”၊ “အင်းလေး”၊ “ကျိုက်ထီးရိုး”၊ “ပုပ္ပါးတောင်”၊ “ငပလီ”တို့ မပါသေးဘူးနော်။ သေချာ တွေးကြည့်ရင် ကျုပ်တို့တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ သိပ်ပြီး မခက်ပါဘူးဗျ”
ကိုဝင်းမြင့်က ဖင်တကြွကြွ ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော့်စကား မဆုံးသေးပါ။
“ကဲဗျာ … ကန်စွန်းတစ်ခင်းပေးရင် ကန်စွန်းရွက် ရောင်းစားဖို့လောက်သာသိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဉာဏ်မပါတဲ့ စိတ်ကူးတွေ စွန့်လွှတ်သင့်ပြီဗျ။ မန္တလေးမြို့ကြီးကို ကျုပ်တို့ပိုင်တယ်။ မန္တလေးနန်းတော်ကြီးကို ကျုပ်တို့ပိုင်တယ်။ အဘိုးတို့၊ အဘေးတို့ ပေးထားခဲ့တဲ့ သမိုင်းတွေ ကျုပ်တို့ပိုင်တယ်၊ သယံဇာတတွေ ကျုပ်တို့ပိုင်တယ်၊ ရေချိုမြစ်ကြီးတွေ ကျုပ်တို့ပိုင်တယ်။ တောင်တန်းပြာပြာကြီးတွေ ကျုပ်တို့ပိုင်တယ်။ လူမျိုးစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ၊ ဓလေ့မျိုးစုံ ကျုပ်တို့ပိုင်တယ်။ မတူညီခြင်း၊ ခြားနားခြင်းဆိုတဲ့ အလှတရားတွေ ကျုပ်တို့ပိုင်တယ်။ မတူညီခြင်း၊ ခြားနားခြင်းတွေကို အလှတရားလို့ ကျုပ်တို့က မမြင်ဘူး။ မတူညီခြင်း၊ ခြားနားခြင်းကို ပြဿနာလို့ မြင်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည် ဆင်းရဲတွင်း နက်လာတော့တယ်။ ဒီမယ် ကိုဝင်းမြင့်ရ…. စိုးရိမ်စိတ်အပေါ် အခြေခံတဲ့ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဟာ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းတရားပဲ။ ယုံကြည်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး အနစ်နာခံတဲ့စိတ်နဲ့ စေတနာသွင်းပါ။ ဉာဏ်သွင်းပါ။ ဒါဆိုရင် ကျုပ်တို့တိုင်းပြည် တိုးတက်လာပြီဗျ”
ကိုဝင်းမြင့်က သူ့လက်ပတ်နာရီကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ဆယ်နာရီ ထိုးခါနီးပြီ။
ကျွန်တော့်ကို အားနာ၍၊ ဒါမှမဟုတ် … သူ့သမီးကို စောင့်ကြိုရင်း အပျင်းဖြေလို၍၊ ဒါမှမဟုတ်… လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်းလို၍ ..... ၍...... ၍...... ၍။ မိတ်ဆွေသဘောအရ စိတ်မပါဘဲ နားထောင်ပေးသွားသည်ကို ကျွန်တော် သိပါသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်ရင်ထဲက အတွေးတွေ၊ စိတ်ကူးတွေကို ပြောလိုက်ရသဖြင့် စိတ်ထဲတွင် တော်တော် ပေါ့ပါးသွားသည်။
တကယ်တော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ၊ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ စိတ်ကူးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုလို့ရတဲ့ “လူမှုဒီမိုကရေစီ ဘုံဗိမာန်” တွေပဲလေ။
“ဒီမယ် ဆရာဘုန်း၊ ကျုပ်ကိုလည်း ကန်စွန်းတစ်ခင်း မပေးနဲ့၊ ခင်ဗျားကိုလည်း ဘယ်သူကမှ မန္တလေးမြို့ကြီး ပေးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဆက်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်လိုက်ဦး၊ ကျုပ် ပြန်တော့မယ်”
တရုတ်ပြည်မှ လာသော လက်ပတ်နာရီကို ငုံ့ကြည့်။
တရုတ်ပြည်မှ လာသော နေကာမျက်မှန်ကို တပ်။
တရုတ်ပြည်မှ လာသော ဟန်းဆက်ကို ကိုင်။
တရုတ်ပြည်မှ လာသော မိုးကာကို ဝတ်။
တရုတ်ပြည်မှ လာသော ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို ဆောင်း။
တရုတ်ပြည်မှ လာသော ဆိုင်ကယ်ကို စီးပြီး …
ကျွန်တော့်အပါးမှ နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွားသည်။
သူ ကျွန်တော်ကို နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ စကားလုံးက
Posted by Ko Nyan Posted Time 4:21 PM2Comment(s) Link This
Labels ၀တ္ထု-Novel, မြန်မာ-Myanmar, နိုင်ငံရေး
ကိသာ သောဘာဝ တာပသာ၊
ထူလာ သောဘာ စတုပ္ပဒါ။
ပုရိသာ စ ၀ိဇ္ဇာ သောဘာ၊
ဣတ္ထီ သောဘာ စ သာမိကာ။
ရသေ့ရဟန်းတို့သည် ပိန်ပိန်လေးနေမှ တင့်တယ်ကုန်၏။
အခြေလေးချောင်းရှိသော သားကောင်တို့သည် ၀ဖြိုးနေမှ တင့်တယ်ကြကုန်၏။
ယောက်ျားတို့သည် အတတ်ပညာရှိမှ တင့်တယ်ကြကုန်၏။
အမျိုးသမီးတို့သည် လင်ရှိမှ တင့်တယ်ကြကုန်၏။
ရေပန်းအစားဆုံး သတင်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ
အပြင်ကမုန့်တွေ ၀ယ်မစားဖြစ်ပါဘူး... အိမ်မှာရောင်းတဲ့ အကြော်လေးရယ်... ရေနွေးကြမ်း ပူပူလေးရယ်... စားရင်းသောက်ရင်း စိတ်ကူးလေးယဉ်ရင်းနဲ့...
မီမီတို့အိမ်က ထမင်းစားဝိုင်းလေးမှာ အမှတ်တရပေါ့...
အိမ်ကဆင်းရဲတော့ မီမီကိုကြည့်ပြီး မျက်နှာရှုံ့သွားကြမှာပဲနော်....
ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ အင်တာနက်ရပ်ဝန်းဟာ အင်မတန်မှကို အပျင်းပြေရပါတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြောဖို့၊ ဆိုဖို့၊ ဆဲဖို့၊ ဖြဲဖို့၊ ဖွဖို့၊ ဆွဖို့ အကြောင်းအရာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ရက် မရှိသလောက်ပါပဲ။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု အမြဲလိုလို ရေပန်းစားပြီး ပြောစရာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေကလည်း တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးရပါဘူး။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ အနုပညာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး စသည်စသည်ဖြင့် နယ်ပယ်စုံလှပါတယ်။ တချို့တွေက အရည်မရ၊ အဖတ်မရတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် လူအမျိုးမျိုးရဲ့ အမြင်အမျိုးမျိုး၊ အတွေးအမျိုးမျိုးကို ဖတ်ခွင့်ရတာဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။ တစ်ဦးချင်းကိုယ်စီ ဘယ်လောက်တောင် အမြင်မတူတာတွေ ရှိသလဲဆိုတာ သိချင်ရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကွန်းမန့်တွေ လိုက်ဖတ်ပါလို့တောင် ညွှန်းရမယ်ထင်ပါရဲ့။
အခုလည်း မြန်မာ Facebook ရပ်ဝန်းကြီး တစ်ခုလုံးကို လှုပ်ခတ်သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ပေါ်ထွန်းလာပြန်ပါပြီ။ အားလုံးနီးပါး သိပြီးသား ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်းကောင်း၊ မသိသေးတဲ့လူတွေ သိစေခြင်းငှာလည်းကောင်း သူနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ သူကတော့ နန်းမီမီမိုးစက် ပါတဲ့။ နစ်ကီ တစ်ယောက် မြန်မာကျော် ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် အခုလောလောဆယ်မှာ မြန်မာအင်တာနက်သုံးသူတွေအတွက် ပြောစရာအဖြစ်ဆုံး Internet Celebrity ဆိုပါတော့။ သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုးသော သမိုင်းတွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ အလွယ်တကူပဲ ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နန်းမီမီမိုးစက်ဆိုတာ အင်တာနက်သုံးဖို့အတွက် သီးသန့်ပေးထားတဲ့ နာမည်ဝှက်တစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးတဲ့ နာမည်က အခြားတစ်မျိုး ဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲဒီလိုပါပဲ... သူ့ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အမျိုးမျိုးပြောကြဆိုကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေချာတာကတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဆင်းရဲခြင်းစကားလုံးတွေ လှိုင်လှိုင်ဝေအောင် စွမ်းအောင်နိုင်ခဲ့သူလေးပါ။ နစ်ကီက အင်တာနက်တစ်ခုလုံး လဲလဲလဲလဲလဲလဲလဲ ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပစ်ခဲ့သလို၊ နန်းမီမီမိုးစက်ကလည်း အင်တာနက်တစ်ခုလုံး အကြော်သည်ဖြစ်အောင်၊ ဆင်းရဲသားဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မှတ်ချက်ပြုစရာ ဘာစကားမျှ မရှိပါဘူး။ သူ့ဟာသူ လူမှုကွန်ရက်မှာ သူရေးချင်သမျှ ရေးထားတာကို ဝေဖန်လောက်အောင် လုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ ယူဆလို့ပါ။ သို့သော် အင်တာနက်သုံးသူတွေအကြားမှာ လှုပ်ခတ်သွားအောင် လုပ်နိုင်တာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
လေးပစ်သူ ဘုရားကျွန်တော် ဖြစ်ခဲ့ရလေသူ
၀ါရင့်ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ဇော်ဝင်းနိုင်တစ်ယောက် အမှတ်တမဲ့၊ သို့မဟုတ် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတစ်ခုကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်မှာ မေတ္တာတွေ အပြည့်အ၀ ခံယူလို့ နေပါရောလား။ ရုပ်ရှင်၊ သို့မဟုတ် ဗီဒီယို ရိုက်ကွင်းတစ်ခုမှာ အမှတ်တရအဖြစ် ရိုက်ကူးထားမှန်း အသိသာကြီးပါ။ သို့သော် အဲဒီဓာတ်ပုံက အင်တာနက်ပေါ် ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဇော်ဝင်းနိုင်တစ်ယောက် သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်သွားရှာပါရောလား။ ဇာတ်ဝင်ခန်းထဲမှာ အသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တမင်ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဓာတ်ပုံဟာလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ အပေါက်ဆုံးပုံတစ်ပုံ ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ တကယ်နစ်နာလို့၊ တကယ်ကို ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့လူတွေကို မပြောလိုပါဘူး။ သို့သော် ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆန္ဒပြပွဲ အငှားလိုက်တဲ့လူ မရှိပါဘူးလို့ ဘယ်သူက အာမခံလို့လဲ။ လူတိုင်းသိနေတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ဘာဖြစ်လို့ အပြောမခံနိုင်၊ အဝေဖန်မခံနိုင် ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာ နားကိုမလည်နိုင်ဘူး။ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို စော်ကားတာ၊ ဝေဖန်တာ၊ သရော်တာဟာ ဒီမိုကရေစီကို စော်ကားတာလို့ ခံယူထားတဲ့လူတွေကို ပြောစရာစကား မရှိပါဘူး။ ဖော်ကာ ရယ်သလိုပဲ ရယ်လိုက်ချင်တယ်။ ဟားဟားဟားဟား။ နစ်ကီ့လေသံလေးနဲ့လည်း ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ သိပ်ရူးတာပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲပဲ...။ :D
နာမည်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဖူးဖူး
မီးလောင်ခံထားရတဲ့ ကလေးလေးက နာမည်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် နန်းခင်ဇေယျာတို့၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တို့ သွားတွေ့ကြပြီး အားပေးစကားပြောကြတာ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ပေးကြတာ၊ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ကြတာကို မြင်ရတွေ့ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သို့သော်လည်း မြန်မာအင်တာနက်လောကရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့လေ... ကလေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အဲဒီနာမည်ကြီးတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ Promotion လုပ်နေကြတယ်လို့ မြင်နေတဲ့သူတွေ၊ ကလေးပုံကို ဖော်ပြလိုက်တဲ့အတွက် နောင်တစ်ချိန်မှာ အဲဒီကလေးက ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီး ဝေဖန်တဲ့လူနဲ့၊ ကလေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး သူ့မိသားစုက လုပ်စားနေကြတယ်လို့ အမနာပ ပြောတဲ့လူနဲ့၊ အို... စုံလို့ စုံလို့ပါပဲ။ စိုင်းစိုင်းတို့၊ နန်းခင်ဇေယျာတို့က သိမသိတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော့်မှာတော့ အင်တာနက်ပေါ်က စာစုတွေ၊ ကွန်းမန့်တွေကို လိုက်ဖတ်ပြီး အတော်ကြီးကို အံ့သြရတယ်။ သြော်... တို့မြန်မာတွေများ တယ်တွေး၊ တယ်ပြောတတ်ပါလား ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ တော်သေးတာပေါ့... ဖူးဖူးလေးက ကလေးဆိုတော့ ရုပ်ရှင်တို့၊ ဗီဒီယိုတို့လောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားသေးတယ် ထင်ပါရဲ့။ တော်ကြာနေ.. ဖူးဖူးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်းက လှလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း။ ဟားဟားဟားဟား... တွေးကြည့်ရင်းနဲ့တောင် အတော်သဘောကျမိတယ်။ ကျွန်တော်သာ ဖူးဖူးရဲ့ ဦးလေးဆိုရင် အဲဒီလို တကယ်မြှောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပြောစရာအကြောင်းအရာတစ်ခု ထပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ မဟုတ်ဘူးလား။ အခု အဲဒီကလေးကို ဓာတ်ပုံအရိုက်မခံတော့ဘူးတို့၊ ဧည့်တွေ့ခွင့် မပေးတော့ဘူးတို့ သတင်းတွေ ထွက်နေတာကိုလည်း ဖတ်ရတယ်။ ကလေးကလည်း အသက်သာ ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတယ်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တို့၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့နဲ့ အတော်တော့ ဘုန်းကြီးတဲ့ကလေးပဲ။ အမယ်.. အဲဒီလိုတွေသာ သတင်းထွက်ပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲပါလာတဲ့ စကားရပ်တွေ ရှိသေးတယ်ဗျ။ ဓာတ်ပုံအရိုက်မခံဘူး၊ ဧည့်တွေ့မခံဘူး၊ သို့သော် ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေတော့ လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့။ အဟမ်း... ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ...။ အလကားနေရင်း ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် မြို့မေတ္တာကို မခံယူတော့ပါဘူး။ :D
တစ်ချိန်တုန်းက အစိုးရအဖွဲ့မှာ ၀န်ကြီးချုပ်အဆင့်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်က သူ့အိမ်မှာ အနုပညာပန်းဥယျာဉ် တည်ထောင်လိုက်တဲ့ သတင်းကလည်း ဟော်လေတကြိုး ဟိုးလေးတကြော် ဖြစ်လို့နေပြန်ပါရောလား။ ရယ်စရာတော့ အကောင်းသားဗျ။ ၀ဋ်လည်တယ်လို့ပဲ ပြောရမလား မသိပါဘူး။ တစ်ချိန်တုန်းက အရာရာကို၊ လူတိုင်းကို မသင်္ကာစိတ်နဲ့ ကြည့်ရှုရတဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အခုတော့ သူလုပ်သမျှကို လူတိုင်းက သံသယစိတ်၊ မသင်္ကာစိတ်နဲ့ ပြန်ကြည့်တာကို ခံနေရရှာတယ်။ ဦးခင်ညွန့် စကားတစ်ခွန်းပြောရင် အဲဒီစကားတစ်ခွန်းကို အဓိပ္ပါယ်တွေ ဖွင့်ကြတယ်၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဟော... အခု အနုပညာပန်းဥယျာဉ် ဖွင့်ပြန်တော့လည်း တွေးတတ်လိုက်ကြတာများ FBI တို့၊ CIA တို့က စုံထောက်တွေတောင် ထိုင်ကန်တော့ရလောက်တယ်။ ကွန်းမန့်တွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်.... ကျွန်တော်တို့ မတွေးမိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေချည်းပဲ။ ကျွန်တော်ဖြင့် လေးစားလွန်းလို့ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ အဲဒီကွန်းမန့်ရေးသူတွေကို အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ဦးညွတ်မိသားခင်ဗျ။ ကျွန်တော်သာ သမ္မတဆိုရင် အဲဒီလူတွေကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့အဖြစ် အကုန်ခန့်ပစ်လိုက်မယ်။ ဘယ်... ထောင့်ကိုစေ့နေတာပဲ၊ ဘယ်နေရာမှာမျှ ဟာကွက်မရှိဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တောင် အဲဒီလောက် စဉ်းစားမိရဲ့လား မသိဘူး။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်သူတွေထဲမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူတွေများ ပါခဲ့ရင် ကွန်းမန့်တွေ လိုက်ရှာဖတ်စမ်းပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဆားပုလင်း(နှင်းမောင်)တွေ၊ အိုင်အို(မင်းအောင်)တွေ အများသားခင်ဗျ။ လိုအပ်ရင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ အကြံပေးခေါ်လို့ရတယ်။ ဧရာဝတီနဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ ဦးခင်ညွန့်တစ်ယောက် အတော်ကြီးကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တယ်ဗျ။ သူလည်း ဟိုအထင်ခံရ၊ ဒီအထင်ခံရဒဏ်ကို မခံနိုင်ရှာတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့ဗျာ။ နိုင်ငံရေးလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ ၃ ကြိမ်၊ ၃ ခါတိတိ ဖြေသွားပါသတဲ့။ စိုးရိမ်လွန်းသူများ၊ စိုးရိမ်နေသူများ စိတ်သက်သာရာ ရလောက်ပြီထင်ပါရဲ့။ :D
ရန်ကုန်စည်ပင်နဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်ဆိုတာ ကြောင်နဲ့ကြွက်၊ ခွေးနဲ့ကြောင်၊ မြွေနဲ့ဖား၊ ကျားနဲ့ဆင်၊ လင်နဲ့မယား ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်ဥနဲ့ ကြက်မ ဘယ်ကစသလဲဆိုတာကို သုတေသန လုပ်တာကမျှ လွယ်လိမ့်ဦးမယ်။ ရန်ကုန်စည်ပင်နဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်ရဲ့ ပြဿနာကို ဘယ်လိုပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကတော့ ဘန်ကီမွန်းလည်း တတ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ဟင်နရီကစ်ဆင်းဂျားလည်း စွမ်းနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ရောင်း၊ ဖမ်း၊ ပြေး၊ လွတ်၊ ရောင်း၊ ပေး၊ လွှတ် စတဲ့ သံသရာနဲ့ပဲ လည်နေဦးမှာပါပဲ။ လမ်းဘေးဈေးသည်ဆိုလို့ သွားတော့ အထင်မသေးနဲ့ဗျို့၊ ကျုပ်တို့ တောမြို့လေးက စတိုးဆိုင်ထက်၊ စားသောက်ဆိုင်ထက် အများကြီးသာတယ်၊ အများကြီးစုံတယ်။ ကဲ... အခုလည်း လမ်းဘေးဈေးသည်တွေရဲ့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုကို ရှုစားကြပါဦး။ သဘောကျမှာ အသေအချာပါဗျာ။ တမင်ရေးထားတာလား၊ ဘာလားဆိုတာတော့ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် သေချာမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် လူစိတ်ဝင်စားအောင် ရေးတတ်တာကိုတော့ အမှတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ သမ္မတကြီးနဲ့ နီးစပ်သူများရှိရင် ပြောပေးလိုက်ကြပါဦး။ :D
အမေရိကန်စီအိုင်အေက စပိုင်ကိုကိုက ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံရုံးမှာ အမှုထမ်းရင်းနဲ့ စပိုင်အလုပ် လုပ်ပါသတဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျေးဇူးရှင် စီအိုင်အေစပိုင်က ရုရှားတစ်ယောက်ကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပါသတဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ သူစည်းရုံးတဲ့ ရုရှားက ရုရှားတန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်နေပါလေရော။ အဲဒီတော့... ကွိပြီပေါ့ဗျာ။ အမေရိကန် စီအိုင်အေဆိုရင် မှော်ဆရာလောက် ထင်မှတ်နေသူတွေအတွက် အံ့သြစရာ ဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ရုရှားကလည်း မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်သပေါ့ဗျာ။ သူတို့လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ သူတို့ကို လာလုပ်လို့ ဘယ်ရလိမ့်မလဲ။ ကဲ... အမေရိကန်ငပွကြီးက ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး လိမ်လည်လီဆယ်ပြီး ငြင်းချက်ထုတ်ဦးမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ တစ်ခု တွေးကြည့်မိတယ်။ အဲဒီ အမေရိကန်ငနဲသာ မြန်မာထောက်လှမ်းရေး ဆိုလို့ကတော့ ကြည့်လှပြီ။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်သွားနိုင်သလို အဲဒီသူလျှိုကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးရင်လည်း မြန်မာပြည်က ပြန်ပြီးတော့ လက်ခံပါ့မလားလို့ သံသယဖြစ်မိတယ်။ အမေရိကန်ကတော့ သူတို့သူသျှိုကို အခမ်းအနားနဲ့များ ကြိုဆိုဦးမလား မပြောတတ်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီလောက်တောင် အသုံးမကျရကောင်းလားဆိုပြီး .........။
ဘောလုံးလောကမှာ မသိသူမရှိအောင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မှော်ဆရာတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ နိဂုံးကို အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီး လှလှပပ အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီရဲ့ နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်အဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ သူရဲနီတပ်သားတွေက အနိုင်ရလဒ်နဲ့ မှော်ဆရာကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ သက်တမ်းအရှည်ဆုံးနည်းပြ၊ ဆုဖလားအများဆုံး ယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နည်းပြအဖြစ် အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီး ဘောလုံးနည်းပြကနေ အနားယူပြီး ဂန္ထ၀င်တစ်ဦးဘ၀ကို ခံယူသွားခဲ့ပါပြီ။ မန်ယူအသင်းကို အားပေးတဲ့သူတွေတင် မဟုတ်ဘဲ အခြားပရိသတ်တွေရဲ့ လေးစားမှုကိုပါ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြတစ်ဦးကို ကျွန်တော်တို့တွေ အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဖာဂူဆန် ကျန်းမာပါစေ... ပျော်ရွှင်ပါစေ... အသက်ရှည်ပါစေ....။
အသက်အတွက် အနှမြောမရှိ ဖြတ်ထုတ်ပစ်ဝံ့သူ
အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်စေမယ့် ကင်ဆာရောဂါကနေ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ရင်သားတွေကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဂျိုလီတစ်ယောက်လည်း ပြောစရာအဖြစ်ဆုံး နာမည်ကျော်တစ်ဦး ဖြစ်နေပါလေရဲ့။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကလည်း သိပ်ခေတ်မီတယ်ဗျ။ ဘရက်ပစ်နဲ့ထပ်တူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရတဲ့လူနဲ့၊ နှမြောတသစွာနဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးကြသူနဲ့၊ အတုကပိုကောင်းမှာပေါ့ဆိုပြီး မျှော်တလင့်လင့် ဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့ စုံနေတာပါပဲ။ အင်း... ဂျိုလီဖက်ရှင်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးဦးတော့မယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ဆီက မော်ဒယ်တွေ၊ မင်းသမီးငယ်တွေလည်း အားကျမခံ ကျွန်မလည်း ကင်ဆာရောဂါကြောက်လို့ ဖြတ်ထုတ်ပစ်မယ်လို့ ဘယ်သူကများ ပထမဆုံး ထုတ်ဖော်ပြောကြား လာလေမလဲလို့ စောင့်မျှော်နေမိကြောင်းပါ။ :D တောက်... နာမည်ကြီးတဲ့လူများ ဘာလုပ်လုပ် ပြောစရာကို ဖြစ်နေတော့တာကိုး။ အင်း... ဒါလည်း သူ့ကုသိုလ်ပဲ ဆိုရမှာပ...။
ဖတ်ရသမျှ၊ မှတ်ထားသမျှကို ခံစားမိသလို ရေးသားလိုက်ပါသည်။ သဘောတော်မငြိ၍ စိတ်ငြိုငြင်စရာ ဖြစ်ခဲ့လျှင်ဖြင့် ခွင့်လွှတ်သနား မေတ္တာထားကြစေလိုကြောင်း ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် တောင်းပန်လိုက်ပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၆ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။
မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၄၁ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 1:54 PM0Comment(s) Link This
Labels Internet, news, Political, ကျွန်တော့်အတွေးများ, သတင်း-News, နိုင်ငံရေး
အားကိုးရာ လေးမျိုး (၁)
ဣတ္ထီနဉ္စ ဓနံ ရူပံ၊
ပုရိသာနံ ၀ိဇ္ဇာ ဓနံ။
ဘိက္ခူနဉ္စ ဓနံ သီလံ၊
ရာဇာနဉ္စ ဓနံ ဗလံ။
အမျိုးသမီးတို့၏ ဥစ္စာသည်ကား အဆင်းလှခြင်းတည်း။
ယောက်ျားတို့၏ ဥစ္စာသည်ကား အတတ်ပညာတည်း။
ရဟန်းတို့၏ ဥစ္စာသည်ကား အကျင့်သီလတည်း။
မင်းတို့၏ ဥစ္စာသည်ကား စစ်အင်အားတည်း။
Fight ဂျာနယ် တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးဖွ ရောဂါရခြင်း
Fight ဂျာနယ်အယ်ဒီတာကြီး ဦးဖွသည် ချောင်းဆိုးသဖြင့် ဓာတ်မှန်ရိုက်ရာမှ အဆုတ်တွင် အလုံးသေးသေးလေး တစ်လုံး တွေ့သဖြင့် ကင်ဆာအထူးကု ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ဆေးခန်းသို့ ရောက်လာလေသည်။
“လာဗျာ… ဦးဖွထိုင်ပါ။ လူကိုတော့ မမြင်ဖူးသေးဘူး။ နာမည်ကတော့ ကြားဖူးနေတာကြာပါပြီ” ဟု ကင်ဆာဆရာဝန်က ကြိုဆိုလေ၏။ ရောဂါရာဇ၀င်ကို မေးမြန်း၍ ဓာတ်မှန်နှင့် လိုအပ်သည်များကို ကြည့်ရှူစစ်ဆေးပြီးသည့်အခါ ဆရာဝန်က ဦးဖွကို ပြောလေသည်။
“ကဲ..ဦးဖွ။ ရင်ဘတ်ထဲက အကျိတ်လေးကိုတော့ ကင်ဆာလို့ထင်တယ်။ ကင်ဆာလို့ ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးနော် ဦးဖွ။ အသားစ ယူဖို့လိုတယ်။ ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန် ရိုက်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ ကင်ဆာထင်ပေမယ့် နောက် ကင်ဆာမဟုတ်ဘူး အဖြေထွက်လာရင် ကျွန်တော့်နာမည်ကြီး ဂျာနယ်ထဲ ပါလာဦးမယ်။ ကင်ဆာလို့ ညာကုတဲ့ ကင်ဆာဆရာဝန်ဆိုပြီး။ ဒီတော့ ခင်ဗျား အသားစယူဖို့ ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆီလွှဲလိုက်မယ်။ သူက ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန် အကူအညီနဲ့ ခင်ဗျားရင်ဘတ်ထဲက အကျိတ်ကို အပ်ကလေးနဲ့ စုပ်ပြီး အသားစယူပေးလိမ့်မယ်။” ဟုပြောဆိုလျက် လွှတ်လိုက်လေသည်။
ဦးဖွသည် ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်ဆီ ရောက်လာသည်။ ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်က “ကဲ..ဦးဖွ။ ခင်ဗျားရင်ဘတ်ထဲက အကျိတ် ကလေးကို ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန် အကူအညီနဲ့ အပ်နဲ့စုပ်ပြီး အသားစယူပေးမယ်။ ဒီမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို ဖတ်ပါ။ ပြီးရင် လက်မှတ်ထိုးပါ။ ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း အဆုတ်ထဲကအကျိတ်ကို အပ်နဲ့ထိုးပြီး အသားစယူရင် ၂% က အဆုတ်ထဲ သွေးယိုတတ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဓာတ်မှန်ဆရာဝန် သက်တမ်းတစ်လျှောက်တော့ ၉၈ ယောက် အသားစ ယူပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဖူး။ ကဲ.. ဒီအန္တရာယ်ကို သိရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပါ” ဦးဖွသည် ရင်ဘတ်ကအောင့်သလို၊ ကျောက အောင့်သလို အောင့်သက်သက်ဖြင့် စာကိုဖတ်ရှုပြီး လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရလေသည်။
အသားစယူခြင်းသည် အဆင်ပြေချောမောစွာ ပြီးဆုံးသွားလေသည်။ နောက်အပတ် အသားစ အဖြေရသည့်အခါ ဦးဖွသည် ကင်ဆာဆရာဝန်ထံ ပြန်သွားသည်။ ကင်ဆာဆရာဝန်က တစ်ရက်ကို လူနာ ၃၀ သာ လက်ခံသည်ဆိုသည်။ ဦးရာလူစနစ်၊ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်စနစ် မရှိသဖြင့် ဦးဖွသည် နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီခန့် ကြိုသွားရလေသည်။ ဦးဖွ မ၀င်ခင် မိသားစုအိမ်သားများက ဆရာဝန်နှင့် အရင်တွေ့ရန် ၀င်သွားကြလေသည်။
ကင်ဆာဆရာဝန်က ပြန်ဖြေသည်။ “တခြားသူဆိုရင်တော့ ရမယ်။ ဦးဖွ ဆိုရင်တော့ မညာနိုင်ဘူးဗျ။ တော်ကြာ သူ့မှာ ကင်ဆာဖြစ်နေတာကို ဆရာဝန်က ထိန်ချန်တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲ၊ ဂျာနယ်ထဲ ထည့်တဲ့အခါကျတော့ ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ယူမှာလား။”
ဆရာဝန်သည် ဦးဖွကို ပြောလေသည်။ “ဦးဖွ ..ခင်ဗျားဆီမှာ အဆုတ်ကင်ဆာတော့ ဖြစ်နေပြီ။ အသားစအဖြေက ကင်ဆာပဲ။ ဘယ်လောက်နေရမလဲ ခင်ဗျားသိချင်နေပြီ မဟုတ်လား။ ရှင်းပြမယ်။ ဆေးဘယ်လို ကုရမယ်။ ဘယ်လောက် နေရမယ်ဆိုတာ သိချင်ရင် ကင်ဆာပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကို သိအောင်လုပ်ရတယ်။ ခင်ဗျား တစ်ကိုယ်လုံးကို ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် ရိုက်မယ်။ အဲ.. ခေါင်းတော့ မပါသေးဘူး။ အဲ.. ခင်ဗျား ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ခေါင်းကိုပါ ရိုက်မယ်။ အဲဒီကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် အဖြေထွက်မှ ခင်ဗျားသိချင်တာတွေ ပြောနိုင်မယ်။ ကဲ.. ဘာမေးဖို့ ရှိသေးလဲ။”
“ဆရာ ဘာလို့ လူနာအများကြီး မကြည့်တာလဲဆရာ။ ပြချင်တဲ့ လူနာတွေက အများကြီး။ ဆေးခန်းကလည်း ဒီတစ်ခုတည်း ထိုင်တယ်ဆိုတော့”
“အထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက် ဆေးခန်းတစ်ခုပဲ ထိုင်ရမယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ပဲ ရေးခဲ့တာမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်က ဆေးရုံမှာလည်း လူနာတွေ ကြည့်ရသေးတယ်ဗျ။ အခွန်ဆောင်ရလွန်းလို့ ဆရာဝန်အလုပ်ကို ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်လို့ ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်အင်အား မပြည့်စုံဘူး။ ပြီးတော့ ဆရာဝန်ကြီးလူတန်းစား ဖျောက်ဖျက်ရေးဆိုပြီး ခင်ဗျားတို့ ဦးဆောင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြလို့ အထူးကုဆရာဝန်မှန်သမျှ ဆရာဝန်ကြီး မဖြစ်တော့ဘူးလေ။ ကျေနပ်တယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်ကိုကြည့်၊ နိုင်ငံခြားပြန် ကင်ဆာအထူးကု ဆရာဝန်ကလေးပဲ။ ဆရာဝန်ကြီး မဟုတ်ဘူး”
ဦးဖွသည် ထိုဆရာဝန် ဘာတွေပြောနေပါလိမ့်ဟု တွေးတောပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ နောက်နေ့ ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် ပြန်ရိုက်တော့လည်း လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာ ၀ါသနာပါသည့် ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်နှင့် ပြန်တွေ့ရပြန်သည်။
“ကဲ..ဦးဖွ။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ။ တစ်ကိုယ်လုံး ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် ရိုက်ရမှာဆိုတော့ ဓာတ်မှန်ပုံထွက်ကောင်းအောင် Contrast ဆိုတဲ့ ဆေးတစ်မျိုးထိုးပြီး ရိုက်ရမယ်။ အဲဒီဆေးနဲ့ မတည့်တဲ့နှုန်းက ၀.၅ % ရှိတယ်။ ခင်ဗျားကို မထိုးခင်မှာ တည့်၊ မတည့် အရင်စမ်းမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆေးတွေ ထိုးပြီးရင် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးသွားတတ်တာ ရှိသေးတယ်။ သူလည်း ရာခိုင်နှုန်း နည်းနည်းပါပဲ။ ကဲ.. သိရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပါဦး။ ကျွန်တော့်မှာ ခင်ဗျားလက်မှတ်တွေ အကုန်ရှိတယ်နော်။ နောက်… ဆေးထိုးပြီး ကျောက်ကပ်ဒဏ်ရာရတော့မှ ကင်ဆာကြောင့် ဘာမှမဖြစ်ဘဲ ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်လုပ်လို့ ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး ဒုက္ခရောက်ရတယ် အပြောခံနေရဦးမယ်”
ဦးဖွသည် လက်မှတ်ထိုး အတော်ဝါသနာကြီးတဲ့ ဆရာဝန်ဟု သုံးသပ်လျက် လက်မှတ်ထိုးရပြန်လေသည်။
နောက်တစ်ရက်မှာ ကင်ဆာဆရာဝန်ဆီ ပြန်ရောက်လာသည်။ ထုံးစံအတိုင်း အစောကြီး ကြိုသွားရသည်။ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဆေးခန်းပေါင်းများစွာမှာ လူနာတွေ တိုးကျိပ်စောင့်ရသလို အခု အထူးကုဆရာဝန်ကြီးလူတန်းစား မရှိတော့သော်လည်း အခြေအနေက ပိုဆိုးနေပါလားဟု တွေးနေမိသည်။
ကင်ဆာဆရာဝန်သည် ဦးဖွ၏ ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ကိုကြည့်ပြီး ပြောသည်။ “ပုံမှန်လူနာဆိုရင်တော့ ဒီလိုအဆင့်မျိုးက ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဆီလွှဲ၊ အဆုတ်က အလုံးလေးကို ခွဲထုတ်လိုက်ရင် လုံလောက်ပြီ။ ဒါပေမယ့် အခုက ခင်ဗျားဆိုတော့။ PET scan ဆိုတဲ့ဟာ နိုင်ငံခြားမှာ သွားရိုက်လိုက်ဦးဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းသော်လည်းပဲ မသင်္ကာစရာ အကျိတ်လေးတွေ ဗိုက်ထဲမှာ တွေ့နေရတယ်။ PET scan ဆိုရင်တော့ ပိုရှင်းတယ်။ မရိုက်လို့တော့ မရဘူး။ တော်ကြာ… ခွဲစိတ်ပြီးနောက် နှစ်လ၊ သုံးလ အဲဒီအကျိတ်တွေကြီးလာရင် ကင်ဆာအဆင့်(၄) ဖြစ်သွားမယ်။ အဲဒီအခါကျရင် အဆုတ်ကင်ဆာ အဆင့်(၄)ကြီးကို ငွေလိုချင်လို့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ ကင်ဆာဆရာဝန် ပေါင်းခွဲတယ် ဖြစ်နေမယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံခြားမသွားနိုင်ရင် ဒီမှာ လက်မှတ်ထိုး။ ဆရာဝန်က PET scan လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြသော်လဲပဲ မိမိဆန္ဒအလျောက် မသွားခဲ့ပါလို့ရေး” ဟုဆိုလျက် ကင်ဆာဆရာဝန်က ရှည်လျားစွာရှင်းပြသည်။
ဒီလိုနှင့် ဦးဖွသည် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ထံ ရောက်လာရပြန်သည်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က “ကဲလာ ဦးဖွ၊ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကင်ဆာအထူးကုကတော့ ခင်ဗျားမျက်နှာမြင်တိုင်း သူ့စာတွေ မေ့မေ့သွားတယ်ပြောတယ်။ ခင်ဗျားကို ခွဲစိတ်မှုအကြောင်း ရှင်းပြမယ်”
သဘောကောင်းပုံရသည့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် ခွဲစိတ်မှုအကြောင်း ဦးဖွကို ရှင်းပြလေသည်။
“အရင်တုန်းကတော့ ဦးဖွရယ်… ဒီလို အကျိတ်အရွယ်လောက်ဆို ရင်ဘတ်ဖွင့်ပြီး ခွဲစရာမလိုဘူး။ Video-assisted Thorascopic Surgery (VATS) ခေါ်တဲ့ မှန်ပြောင်းလေးထည့်ပြီး အကျိတ်လေးကို ခွဲထုတ်လိုက်လို့ရတယ်။ အခုတော့ အဲဒီလိုခွဲတတ်တဲ့ ဆရာဝန်က တစ်နှစ်ကို အခွန်သိန်းတစ်ရာဆိုတော့ ပြေးပြီဗျ။ ဟိုမှာက ဒီထက် လစ ၁၀ ဆ၊ အဆ ၂၀ ပိုများပေမယ့် အခွန်က ဒီလောက်မများဘူးလေ။ ပြီးတော့ လူနာတစ်ယောက်ခွဲပြီး ထွက်လာပြီဆို မီဒီယာတွေက လူနာနားမှာ ဘာဖြစ်လေမလဲဆိုပြီး ၀ိုင်းအုံနေကြတော့ သူလည်း မခံနိုင်တော့ဘူး ထင်ပါရဲ့ဗျာ”
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ဆက်ပြောသည်။ “ကျွန်တော်လား… ဟဲဟဲ… ကျွန်တော့်ကိုတော့ ဘယ်သူမှ မတိုင်ကြဘူးဗျ။ တိုင်လည်း အရေးမယူရဘူးလို့ အထက်လူကြီးများက အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်း အဆုတ်ခွဲတတ်တဲ့ဆရာဝန် ရှိတော့တာကိုး။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကင်ဆာဆရာဝန်ကတော့ ခင်ဗျားကိုတွေ့ရင် စာတွေ မေ့မေ့ကုန်တယ်ဆိုလား။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ အခြေအနေတွေက ဒီလိုရှိတာကိုး။ ကျွန်တော်က ကြောက်စရာ မလိုဘူးလေ”
နောက်တစ်နေ့တွင် အယ်ဒီတာကြီး ဦးဖွကို သူ့အခန်းထဲတွင်ပင် ဆွဲကြိုးချလျက် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူရေးထားခဲ့သည့် စာထဲတွင် အကျိတ်သေးသေးလေးအတွက် ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ဖွင့်ပြီးခံရမှာ အလွန်ကြောက်မိကြောင်း၊ သွားတိုင်း လက်မှတ်ထိုးနေရသည့် ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်နှင့်လည်း ထပ်မတွေ့ချင်တော့ကြောင်း၊ သေစကားချည်း လွှတ်ပြောတတ်ပြီး သူ့ကိုမြင်လျှင် ဂျာနယ်ထဲအထည့်ခံရမှာ အလွန်ကြောက်သော ကင်ဆာဆရာဝန်နှင့်လည်း စကားမပြောချင်တော့ကြောင်း စသည်ဖြင့် ရေးသားထားလေသည်။
ဦးဖွ၏ ရေးသားထားချက်များကို သူ၏ ဂျာနယ်တိုက်က အထူးသတင်းအဖြစ် (ထည့်စရာသတင်းမရှိသောကြောင့်) ခေါင်းစီဆောင်းပါးအဖြစ် ထည့်လိုက်လေရာ Fight ဂျာနယ်ကြီး ရောင်းမလောက်အောင် ပေါက်သွားပါကြောင်း။
(တာဝန်သိ စေတနာရှင် ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ပြောပြမှုကို အခြေခံလျက် ပျော်ရွှင်ရယ်မောနိုင်ကြစေရန် ရေးပါသည်)
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:17 PM0Comment(s) Link This
Labels မြန်မာ-Myanmar, ဟာသ-Funny
ကောကိလာနံ သဒ္ဒံ ရူပံ၊
၀ိဇ္ဇာ ရူပံ အရူပါနံ၊
ခမာ ရူပံ တပဿီနံ။
ဥသြငှက်တို့၏ အလှသည်ကား အသံတည်း။
အမျိုးသမီးတို့၏ အလှသည်ကား လင်ကို မြတ်နိုးစွာ ပြုစုလုပ်ကျွေးခြင်းတည်း။
ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ မလှပသော သူတို့၏ အလှသည်ကား အတတ်ပညာတည်း။
ရသေ့ရဟန်း သူတော်စင်တို့၏ အလှသည်ကား သည်းခံခြင်းတည်း။
Posted by Ko Nyan Posted Time 12:03 PM0Comment(s) Link This
အခြေခံဥပဒေ ဘာတွေပြင်မလဲ ဘယ်လိုပြင်မလဲ - ကျော်ဝင်း
အခြေခံဥပဒေ ကိစ္စတွင်သာမဟုတ် နိုင်ငံရေးပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်လျှင် ချဉ်းကပ်ပုံ နှစ်မျိုးရှိသည်ဟု ယေဘုယျ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ‘နှုန်းစံအခြေပြုချဉ်းကပ်နည်း’ (Normative approach) နှင့် "လက်တွေ့အခြေပြုချဉ်းကပ်နည်း" (Pragmatic approach) တို့ ဖြစ်သည်။
နှုန်းစံအခြေပြုချဉ်းကပ်နည်းက၊ မိမိတန်ဖိုးထားရာ စံနှုန်းများကို အသေကိုင်သည်။ အဆိုပါစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီလျှင်၊ ထောက်ခံမည်၊ ကြိုဆိုမည်။ မကိုက်ညီလျှင် ဆန့်ကျင်မည်၊ ကန့်ကွက်မည်။ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မရှိချေ။ လက်တွေ့အခြေပြု ချဉ်းကပ်နည်းကမူ၊ မိမိတန်ဖိုးထားရာ စံနှုန်းများကို အသေမကိုင်၊ လုံးဝပစ်ပယ်သည်တော့ မဟုတ်။ ‘အနာဂတ်အမြင်’ (vision) အဖြစ် သဘောယူပြီး၊ လက်ရှိပကတိအရှိကို အခြေတည် စဉ်းစားသည်။ အလုပ်ထောင့်မှကြည့်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ရှာသည်။ မတူချေ။
နိုင်ငံများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လျှင် ထောင့်အစေ့ဆုံး၊ စံကိုက်အကျဆုံးအဖြစ်၊ သူ့ခေတ်သူ့အခါက အလွန်ကျော်ကြားခဲ့ဖူးသည်မှာ၊ ပထမကမ္ဘာစစ်နှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြား၊ ဂျာမဏီ၏ ဝိုင်မာသမ္မတနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်ပါသည်။ သို့နှင့်တိုင် ဤအခြေခံဥပဒေအောက်မှာပင် ‘ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော အာဏာရှင်’ (elected dictator) တစ်ယောက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဟစ်တလာ ဖြစ်ပါသည်။ ‘နှုန်း’ တွေ၊ ‘စံ’တွေအရ မည်မျှပင် ကောင်းမွန်ပါစေ..၊ လက်တွေ့ကျင့်သုံးပုံ ဟန်မကျလျှင် ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်သွားနိုင်သည့်သာဓက …။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အခြေခံဥပဒေမှာ၊ စတင်ခါစက အားနည်းချက်တွေ အတော်ရှိသည်။ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်များ၏ အခြေခံဥပဒေမှာဆိုလျှင်၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ‘ကျွန်စနစ်’ ကိုပင် ခွင့်ပြုထားသည်။ သို့တစေ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကျင့်သုံးပြီး၊ ပါးပါးနပ်နပ် ပြင်ဆင်နိုင်သောအခါ၊ အကောင်းဆုံး အခြေခံဥပဒေတစ်ခုအဖြစ် အများက သိမှတ်လက်ခံနေရချေပြီ။ အခြေခံဥပဒေ တစ်ခုအနေနှင့် ‘စံကျ’၊ ‘စံကိုက်’ မဟုတ်သည့်တိုင်၊ လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရင်း အမြော်အမြင်ရှိရှိ ပြုပြင်နိုင်လျှင် အကောင်းဘက်သို့ ဦးတည်နိုင်သည့် သာဓက။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေနှင့် တုန့်ပြန်မှုများ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဒီမိုကရက်တစ် နှုန်းစံများအရကြည့်လျှင် ပြောစရာနှင့် ဆိုစရာချည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဖြစ်ကို၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီများ မသိ၍မဟုတ်။ ကောင်းကောင်းသိကြသည်သာ ဖြစ်သည်။ သို့တစေ သူတို့က နှုန်းစံများဖြင့် မကြည့်။ အလုပ်ထောင့်မှကြည့်ပြီး ‘နိုင်ငံရေးအဖွင့်ကျားကွက်’ (political opening) တစ်ခုသို့ ဦးတည်သွားနိုင်စရာရှိသည်ဟု တွက်ဆသည်။ သို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
သို့နှင့်တိုင် ‘နိုင်ငံရေးဓလေ့’ (political culture) မှာပင် နှုန်းစံအစွဲကြီးသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဤအယူအဆနှင့် ဤအတွက်အချက်ကို လူကြိုက်မများခဲ့ပါ။ ‘အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်’ (NLD) အပါအဝင်၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစု တော်တော်များများက ‘ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ရေး’ ဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။ NLD က ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်မပြု၍ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို လက်မခံနိုင်၍ (အချက်သုံးချက်ကြောင့်) ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့တစေ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်မူ NLD ပါ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ရသည့် အကြောင်း ၃ ချက်အနက် ၂ ချက်ရပြီဖြစ်၍ မရသေးသော ကျန်တစ်ချက် (အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး)ကို လွှတ်တော်တွင်းမှ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ရခဲ့ပြီဆိုသော ၂ ချက်ထဲမှ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေကို ပြင်ပေးခဲ့သည်မှာကား အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ (အမှန်တော့ ပြင်မပေးလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ပြစ်ဒဏ်စေ့ခဲ့ပြီဖြစ်၍ တားဆီးလို့ရတော့သည် မဟုတ်ပါ။)
နောက်တစ်ချက်၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီ - ဆိုသည်ကိုမူ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် နှင့် ကိုကို(စက်မှုတက္ကသိုလ်) တို့၏ အင်တာဗျူးဖြင့် သာဓကတင်သည်။ အဆိုပါ အင်တာဗျူးတွင် ဦးခင်အောင်မြင့်က “၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုလို့ပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေကို တရားဝင် ကြေညာပေးခဲ့တာပေါ့ဗျာ” စသဖြင့် ဖြေသွားခဲ့သည်။ (ဤမျှနှင့် - အမှန်တကယ် အသိအမှတ်ပြုရာ ရောက်ပါ၏လော…၊ စဉ်းစားစရာ…။ ) ထားတော့။
မည်သို့ပင်ရှိစေ NLD ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာသည်မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အလွန်အားကောင်းသော ဖြည့်ဆည်းမှု ဖြစ်လာသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ‘လက်တွေ့အခြေပြုချဉ်းကပ်မှု’ ဘက် ရောက်လာသည်ဟု ဆိုချင်သည်။ သူ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှ အသုံးအနှုံးအတိုင်း ဆိုရလျှင် ‘တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်း’ မှ ‘တည်ဆောက်ရေးလမ်းကြောင်း’ ဘက် ရွေ့လာသည်ဟု သဘောရပါသည်။ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလက ‘ကြွေးကျော်ခဲ့သော အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး’ ဆိုသည်ထက် လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်သည်များကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။
လက်တွေ့တွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို စတင်အဆိုပြု တင်ပြလိုက်သည်မှာ အာဏာရပါတီဟု ဆိုနိုင်သော USDP ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် ဘာတွေပြင်မည်၊ ဘယ်လိုပြင်မည် ဆိုသည်ကိုကား သဲသဲကွဲကွဲ မသိရသေးပါ။ ကော်မတီဖွဲ့ပြီး လေ့လာသုံးသပ်ဆဲအဆင့် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သူက အဆိုပြုတင်ပြသည်ဖြစ်စေ၊ အခြေခံဥပဒေကို အသေမကိုင်ဘဲ ပြင်သင့်ပြင်ထိုက်သည်များကို ပြင်ရမည်ဆိုသော စဉ်းစားချက်ကိုမူ ကြိုဆိုကြရပါလိမ့်မည်။ ပြောရလျှင် မည်သည့်အခြေခံဥပဒေမျှ ရာနှုန်းပြည့် ပြီးပြည့်စုံသည်မရှိပါ။ လက်တွေ့ အလုပ်လုပ်ရင်း အဟန့်အတား အခက်အခဲများရှိလျှင် ပြင်ကြရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူမှတ်မိသလောက် နိုင်ငံတကာပညာရှင်များထဲမှ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို ပထမဆုံး အဆိုပြုခဲ့သူမှာ စတင်းဖို့(ဒ)တက္ကသိုလ်မှ ‘လာရီဒိုင်းမွန်း’ ဟု ထင်သည်။ သူက ၂၀၁၅ တွင် ကြုံတွေ့ဖွယ်ရာရှိသည့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းကို ထောက်ပြပြီး အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် စဉ်းစားကြဖို့ သူ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် အကြံပြုခဲ့သည်။ (၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် Journal of Democracy ပါ ‘The Need foraPoliticalPact’ ဆောင်းပါး။ စာရေးသူဘာသာပြန်ပြီး)
သူ၏ အလိုအရဆိုလျှင် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံအရ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲသာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှု ရှိခဲ့လျှင် NLD အပြတ်အသတ် အနိုင်ရဖို့ များလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။ အကယ်၍ ဤအတိုင်းဖြစ်ခဲ့လျှင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကံကြမ္မာမျိုး မတိုးနိုင်ပါသလော - မေးခွန်းထုတ်သည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ တပ်မတော်မှ အများစုနေရာယူထားသော အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီက အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာနိုင်သည့် အချက်ကိုလည်း ထောက်ပြသည်။ ဤအချက်များအရ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်သည့် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အစိုးရအဖွဲ့မှ ‘သဘောထားပျော့ပြောင်းသူများ’ (soft liners)နှင့် အတိုက်အခံဘက်မှ ‘အစွန်းမရောက်သူများ’ (moderates) အခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြဖို့ အကြံပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဆောင်းပါးမှာပင် ဆိုခဲ့ပါ ၂၀၁၅ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရေးအတွက် နည်းလမ်းတစ်သွယ်အဖြစ် ‘အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်’ (PR - စနစ်) ကျင့်သုံးဖို့ အဆိုပြုခဲ့သည်လည်း ရှိသည်။ သို့နှင့်တိုင် NLD က PR စနစ်ကို လက်မခံနိုင်ဟု သတင်းများထွက်နေလေရာ အကယ်၍ ဤသတင်းသာ မှန်ခဲ့လျှင် PR စနစ်သည်ပင်လျှင်၊ နောက်ထပ် အကျပ်အတည်းတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲအတွက် နိုင်ငံရေးပဋိညာဉ်တစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာစေရန် နှစ်ဘက်သဘောထားပျော့ပြောင်းသူများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာကြပါ - ဆိုသော လာရီဒိုင်းမွန်း၏ အကြံပြုချက်မှာကား လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိလေမည်လား စဉ်းစားမိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် (သူမ၏ အသုံးအနှုန်းအရ) တည်ဆောက်ရေးလမ်းကြောင်းသို့ သိသိသာသာ ရွေ့လာခြင်း၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ (အမြင်အရ) ဆက်ဆံရေး အထူးကောင်းမွန်နေခြင်း၊ ထို့ထက် လက်ပံတောင်းကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ ထွက်ခါစလောက်က လျှံထွက်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ဝေဖန်ချက်တစ်ခုတွင်ပါသည့် “ဒေါ်စုက သူသမ္မတဖြစ်ဖို့ စစ်ဗိုလ်တွေကို လိုက်လျောလွန်းနေတယ်” ဆိုသော စွပ်စွဲချက်…။ ဤအချက်များကို ဆက်စပ်စဉ်းစား ကြည့်လိုက်သောအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်တာဝန်ရှိသူများအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများ ရှိနေမည်လား - တွေးစရာရှိသည်။ ပြောရလျှင် ‘နားလည်မှု’ တစ်ခုခုပင် ရှိကောင်းရှိလေမည်လား (ကံသေကံမ မဟုတ်သည့်တိုင်) စဉ်းစားစရာ ရှိလာသည်။
ဤနားလည်ချက်မှာ ဘယ်အရာဖြစ်လိမ့်မည် ဆိုသည်ကို တိတိပပ မပြောနိုင်သည့်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ကောင်း ပတ်သက်နိုင်ပါသည်။ ဤသို့ ယူဆနိုင်လောက်သည့် သတင်းအချက်အလက် အချို့လည်း ရှိတန်သလောက် ရှိနေသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က သမ္မတဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခြင်း။ သမ္မတကလည်း ပြည်သူလူထုလိုလားလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်နိုင် - ဆိုသည့်သဘော ပြောဖူးခြင်း။ မကြာသေးခင်ကပင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေးအတွက် အခြေခံဥပဒေပါ သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများ၏ အရည်အချင်းများကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ သဘောပြောဆိုလာခြင်း… စသည်များ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ဤမှန်းဆချက်သာ မှန်ခဲ့လျှင် ၂၀၁၅ နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်စရာရှိ၍ ကြိုဆိုအပ်သည်ဟု သဘောရပါသည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနှင့် နိုင်ငံရေးအာဏာ ရယူလိုသည်မှာ လွန်စွာမှပင် သဘာဝကျသည်ဟု ယူဆသည်။ “တော်လှန်ရေး၏ အဓိကပြဿနာမှာ အာဏာ” ဆိုသော ‘လီနင်’ ၏ စကားရှိသည် မဟုတ်ပါလော… ။ (ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်နေကြသူများမှာ လက်ဝဲနွယ်များဖြစ်၍ လီနင်ကို ကိုးကားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကား - စကားချပ်)
ထို့ထက် စာရေးသူ အာရုံညွတ်သော အယူအဆတစ်ရပ်ရှိသည်။ Minilateralism၊ ‘အနည်းဆုံး ညှိလမ်းကြောင်း’ ဆိုပါစို့။ အားလုံးပါဝင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြသည့် Multilateralism မှာ သီအိုရီအရ ကောင်းပါ၏။ လက်တွေ့အဖြေပေါ်ဖို့ သိပ်မလွယ်။ အမှန်တကယ် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အနည်းငယ်မျှ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အဖြေရှာကြသည့် Minilateralism ကသာ အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်သည်။ ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးရွှေမန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်…၊ သူတို့အချင်းချင်း နားလည်မှုဖြင့် အကျပ်အတည်းကို ကျော်နိုင်လျှင် မကောင်းပါသလော… ။ ကောင်းသည်ဟု ယုံသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲမှာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသာမက အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တစ်နည်း ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေးပါ အကျုံးဝင်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင် အခင်းအကျင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံ တစ်ခုလည်း ချမှတ်ဖော်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါလမ်းပြမြေပုံ တတိယအဆင့်တွင် လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများသာမက ဆက်စပ်ပတ်သက်သူအားလုံး စုစည်းပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမည့် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တစ်ရပ် ရယူနိုင်သည်အထိ ကြိုးပမ်းမည်ဟု ဆိုသည်။ ဤအဆင့်တွင် လိုအပ်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအထိပါ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြမည်ဟု လမ်းဖွင့်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် ဒုတိယအဆင့် စတင်နေပြီဖြစ်၍ ၂၀၁၅ မတိုင်မီ တတိယအဆင့်သို့ ရောက်ကောင်းရောက်သွားနိုင်သည်။ အဆိုပါ တတိယအဆင့် ဆွေးနွေးကြတော့မည်ဆိုလျှင် စကားလုံးတစ္ဆေကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အစိုးရိမ်လွန်မှုကြောင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြောခွင့်၊ ဆိုခွင့်၊ ဆွေးနွေးခွင့် မရခဲ့သော ဖက်ဒရယ်စနစ် အကြောင်းကိုလည်း ပြောကြဆိုကြ ဆွေးနွေးကြရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှာ ဖက်ဒရယ်သဘောများ အတော်အတန် ပါသော်လည်း အစိုးရ၏ ပေးထားချက်သာ ဖြစ်လေရာ လူမျိုးစုများဘက်မှ ဖြည့်စွက်၊ ပြင်ဆင်လိုသည်များ၊ သဘာဝကျစွာ ရှိလာနိုင်ပါသည်။
လွှတ်တော်က ပြင်ဆင်မည့် အခြေခံဥပဒေတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသော အချက်များ (ဥပမာ - ဇယား ၁၊ ၂၊ ၃ နှင့် ၅) ပါမပါ မသိရသေးပါ။ အကယ်၍ ဤအချက်များကို ပြင်ဆင်မည်ဆိုလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းပြမြေပုံ အဆင့် ၃ နှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုမည်ထင်ပါသည်။ ဤသို့ မဆက်စပ်ဘဲ သီးခြားဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သော ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်လျှင်သော်မှ အများလက်ခံနိုင်မည့် အဖြေဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူ ယနေ့တည်ဆဲလွှတ်တော်တွင်၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှ မှတ်ပုံတင်ကြသော နိုင်ငံရေးပါတီများ မပါကြသေးသလို လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များလည်း မပါသေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိစ္စမှာ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေရာ လူမျိုးစုအားလုံး စုံစုံညီညီပါဝင်သည့် all inclusive ညီလာခံမျိုး ဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် လူပြောများသည့် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ % နှင့် ပတ်သက်သော စာရေးသူအမြင်ကို တင်ပြပါမည်။ ပြောရလျှင် ဤကိစ္စမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး၏ အသိမ်မွေ့ဆုံး၊ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဟု ဆိုနိုင်လောက်သော ‘စစ်ဘက်-အရပ်ဘက်’ ဆက်ဆံရေးပြဿနာ ဖြစ်လေရာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ အစောတလျင် မဆုံးဖြတ်သင့်ဟု သဘောရပါသည်။
တပ်မတော်အနေနှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတွင် ဦးဆောင်မှုအခန်းမှ ပါဝင်ရေး ဆိုသည်ကို ရပ်ခံထားသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ အဆိုပါရပ်ခံချက်ကို တရားဝင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်သဘော ဖြစ်ပါသည်။ ဒီမိုကရက်တစ် စံနှုန်းများအရဆိုလျှင် အရပ်ဘက်က စစ်ဘက်အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်မှသာ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဟု ဆိုရပါလိမ့်မည်။ သို့နှင့်တိုင် ရာစုဝက်မျှ ကြာမြင့်ခဲ့သော စစ်ဘက်အုပ်စိုးမှုမှ ထိုးထွက်ခါစ နိုင်ငံတစ်ခုအနေနှင့် ဒီမိုကရက်တစ် စံနှုန်းများနှင့်အညီ ချက်ခြင်းပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဆိုသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ အလွန်နည်းပါသည်။
ထို့ထက် ဆိုခဲ့ပါ ရပ်ခံချက်အတွက် တပ်မတော်၏ အကြောင်းပြချက်မှာ ကြိုက်မကြိုက် အသာထား၊ ငြင်းဖို့ခက်သည့် အနေအထားတွင်လည်း ရှိနေသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း အင်အားအကြီးဆုံး ဗကပ မရှိတော့သည့်တိုင် တော်လှန်ပုန်ကန်နေကြသော လက်နက်ကိုင်အင်အား စုစုပေါင်းမှာ ယခုအထိ တစ်သိန်းအထက် ရှိနေဆဲဟု သိရသည်။ လူဦးရေနှင့် အချိုးချကြည့်လျှင် သူပုန်အများဆုံးတိုင်းပြည် ဖြစ်နေသည်။ ထိုမျှမက အစိုးရသစ်သက်တမ်း ၂ နှစ်သာသာ ကာလအတွင်း ထိပ်တက်လာသော လုံခြုံရေးပြဿနာများကလည်း ရှိနေပြန်သည်။ ပြောရလျှင် - ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်နိုင်မှသာ စစ်ဘက်-အရပ်ဘက် ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်ဖို့ လမ်းပွင့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အမှန်စင်စစ် တပ်မတော်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပုံဖော်နိုင်ရေးမှာ ဒီမိုကရေစီအတွက် အရေးကြီးသည့်တိုင် ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် သဘောရှိသည်။ အချိန်မတိုင်မီ အလောတကြီး ဆောင်ရွက်လိုက်လျှင် လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ်အတွက် အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်ချက်ပင် ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိသည်။ လက်ရှိ စစ်ဘက်၊ အရပ်ဘက် အင်အားချိန်ခွင်လျှာအရ တပ်မတော်၏ သဘောတူ ကြည်ဖြူမှုမရလျှင် ၂၅% ကိစ္စမှာ၊ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါချေ။ အန္တရာယ်ကြီးသော နိုင်ငံရေးမီးရှူးမီးပန်းသာ ဖြစ်ဖို့များပါလိမ့်မည်။
ယခုစာစုကို ‘ဒီမိုကရက်တိုင်ဇေးရှင်း’ ပညာရပ်၏ ခေါင်းကိုင်ဖခင်တစ်ဦးဟု ဆိုနိုင်လောက်သော ပါမောက္ခဂီယာနိုဒီယာ၏ သတိပေးစကားဖြင့် နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။ ယခုလို …
“ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲမှာ လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်သေးတာက မစမိပါစေနဲ့။ အကျိုးရလဒ်ထွက်ဖို့ အခွင့်အလမ်း အကောင်းဆုံးနယ်ပယ်မှာ အာရုံစိုက်ပါ။ ဒါက စပါ… ”
၁၂၊ မေ ၂၀၁၃
[ဆရာကျော်ဝင်း၏ Facebook စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်]
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:56 AM0Comment(s) Link This
ဥပမံ ဧတ္ထ ဉာတဗ္ဗံ၊
သူရိယ စန္ဒ ရာဇူနံ။
ချိုချိုအေးအေး ပြောဆိုတတ်သောသူမှာ မိတ်ဆွေပေါများ၏။
ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြောဆိုတတ်သောသူမှာ မိတ်ဆွေ အရနည်း၏။
ဤအရာ၌ နေမင်းနှင့် လမင်းတို့၏ ဥပမာကို သိသင့်၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 6:59 AM0Comment(s) Link This
အင်တာနက်မှာ ဖတ်မိသမျှ (၁)
Posted by Ko Nyan Posted Time 4:04 PM0Comment(s) Link This
ရောဂါတုရေ စ ဒုဗ္ဘိက္ခေ၊
ဗျသနေ စ သတြုဂဟေ။
ရာဇဒွါရေ သုသာနေ စ၊
သခါ တိဋ္ဌာ သုမိတ္တကာ။
အမှုကိစ္စဖြင့် မင်း၏ နန်းတော်သို့ သွားရသောအခါ
သုဿာန်၌ နာရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရသောအခါ
ဤသို့သော အခါတို့၌ မိမိနှင့်အတူ ရပ်တည်၍ ကူညီစောင်မသော မိတ်ဆွေသည် မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်၏။
ခံစားမှုများ၊ ပေါက်ကွဲမှုများ၊ ရင်ဖွင့်မှုများ
တောက်... ဒလိုင်းလားမားလိုလူက မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေမှာ ရဟန်းတော်တွေရဲ့ ပါဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ရှုံ့ချတယ်တဲ့။ ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေက ပြောရင်တောင် အဲဒီလောက် စိတ်တိုမိမှာမဟုတ်ဘူး။ အခုတော့... ဒလိုင်းလားမားလိုလူရဲ့ အပြောအဆိုကို ခံရတယ်။ ပြောတဲ့လူကို အပြစ်သွားတင်လို့ မင်းတို့ဆီက သင်္ကန်းဝတ်တွေကရော အပြောမခံရအောင် နေလို့လားလို့ ပြန်မေးရင် ဒီကကောင် ဟတ်ထိရဦးမယ်။ ဒလိုင်းလားမားလို ကမ္ဘာသိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က ပြောတယ်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူချင်ရင်လည်း ဂုဏ်ယူကြပေါ့ မြန်မာသင်္ကန်းဝတ်တို့ရယ်....။ ၀ီရသူဆိုတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ကလည်း ၀ါးလုံးခေါင်းထဲမှာပဲ လသာချင်နေတာလား မသိဘူး။ လုပ်စမ်းပါ... ဒလိုင်းလားမားလိုမျိုး ကမ္ဘာပတ်ပြီး မွှေပါတော့လား။
ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးနဲ့ သမ္မတရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တဲ့ ဦးရဲထွဋ် ကို ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားလို့ ဘာလို့ထင်ကြတာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် တကယ်ပဲ နားမလည်ဘူး။ သူ့ခမျာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောရ၊ ရေးရတာလည်း အာပေါက်တော့မယ်။ လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ ဒီလိုအပြောအဆိုခံနေရတာတွေအတွက် လွှတ်တော်မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဆိုတာ ဘယ်သူပါဆိုတာ သူတို့သိနေပြီဆိုရင်လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်ပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ဟိုလူနိုးနိုး၊ ဒီလူနိုးနိုးနဲ့ ဘာမှန်းကိုမသိဘူး။ တစ်ခု အံ့သြစရာ ကောင်းတာကတော့ ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နည်းနည်းနဲ့ သတင်းပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ဟာ ဒီတစ်ခါတော့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကိစ္စမှာ ဘယ်သူ့ဆီကမျှ သတင်းမပေါက်တာပါပဲ။ ဘယ်ဂျာနယ်ကမျှလည်း ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဆိုတာ ဘယ်သူပါလို့ လွှတ်တော်အမတ်ကြီးတွေဆီမှာ တိတ်တိတ်လေးကပ်မေးပြီး ရေးကြတာကို မတွေ့ရပါဘူး။ နောက်ထပ် မတွေ့ရတာတစ်ခုက ဘယ်ဂျာနယ်၊ ဘယ်မီဒီယာကမျှ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကိစ္စမှာ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပြောဆိုခွင့်ကို ထိပါးတယ်လို့ မအော်၊ မပြော၊ မရေးကြတာပါပဲ။ ဟားဟားဟား.... ကိုယ့်ထိမှ နာတတ်ကြတာကိုး။ ဦးရဲထွဋ်က ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဘယ်သူလဲ။ အမေရိကန်တွေ အိုစမာဘင်လာဒင် ရှာတုန်းကလို ဖြစ်နေပြီထင်ပါရဲ့။ ဟိုနိုင်ငံမှာရှိသလိုလို၊ ဒီနိုင်ငံမှာရှိသလိုလိုနဲ့ သတင်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုထုတ်ခဲ့တာ ပြန်သတိရမိပါတယ်။ အခုလည်း လွှတ်တော်ကသိနေပါပြီဆိုတဲ့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကို ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်စံအိမ်ကြီးမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တွေ့ရဦးမလဲလို့ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် မန်နေဂျာ ဖာဂူဆန်တစ်ယောက် အနားယူတော့မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ဖော် ကြေညာသွားခဲ့ပါပြီ။ အင်္ဂလန်အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ရယူပေးခဲ့ပြီး အနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားခဲ့တာပါ။ ဒီစံချိန်ကို မီနိုင်တာဆိုလို့ လီဗာပူးလ်တစ်သင်းပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လီဗာပူးလ်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့လည်း နောင် ၁၀ နှစ်လောက်အထိ မန်ယူရဲ့ စံချိန်နဲ့တူအောင် လိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ဖာဂူဆန် မသေမချင်းတော့ သူ့စံချိန်ကို မီမယ့်လူ ပေါ်လာဦးမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး အသင်းတစ်ခုဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆန်ကို မန်ယူပရိသတ်အားလုံးက အမြဲတစေ အမှတ်ရနေမှာပါ။ နောင်လာမယ့် မန်ယူအသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ဖာဂူဆန်ရဲ့ အော်ဟစ်ညွှန်ကြားတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ပေမယ့် ဘော်ဘီချာလ်တန်တို့နဲ့အတူ မန်ယူအသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တိုင်းကို အထူးတန်းကနေ ကြည့်ရှုနေတာကိုတော့ ရုပ်သံတွေကနေတစ်ဆင့် မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် ဖာဂူဆန်၊ လေးစားပါတယ် ဖာဂူဆန်၊ ဦးညွတ်ပါတယ် ဖာဂူဆန်။ သင့်ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပီသမှုကို အမြဲတစေ အားကျအတုယူလျက်ပါ။
ဟိုပန်မြို့နယ်မှာ ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ကို လာရောက်ခြင်းမပြုဖို့ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတယ်။ သူတို့နည်းနဲ့သူတို့ ပြန်ခံနေရပြီလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ဂျာနယ်တွေ ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်မယ်။ အထူးသဖြင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကို လုံးဝအထိမခံတဲ့ ဆရာမောင်ဝံသ ဘာရေးမလဲ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ကျွန်တော့်မှတ်ချက်ကို ဘာမျှမပြောလိုသေးဘူး။ သူများတွေရဲ့ မှတ်ချက်ကို အရင်စောင့်ဖတ်မယ်။ စိတ်ဝင်စားတာက အခုဆန္ဒဖော်ထုတ်တာကိုရော ဘယ်သူတွေက စီစဉ်ပေးတာလဲ။ ၈၈ မျိုးဆက်ကို မကျေနပ်တာဆိုရင်တော့ ၂၀၀၈ မျိုးဆက်ပဲ ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ နော...။ :D
ကြိုးဖုန်းတွေကနေ ပြည်ပဖုန်းခေါ်ဆိုခကို ဈေးနှုန်းလျှော့ချပေးတယ်တဲ့။ အင်း... လုပ်ချင်ရာသာ လုပ်ကြပါလေ။ မပြောချင်တော့ပါဘူး... ပြောကို မပြောချင်တော့ပါဘူး။ လုပ်ချင်ရာအလုပ်ဆုံးနဲ့ အပြောင်းအလဲ အများဆုံး ၀န်ကြီးဌာနကို ဆုပေးပါဆိုရင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပေးရမယ်။ ဘယ်ဟာမှလည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ မူချထားတာ မရှိဘူး။ အခုလည်း ကြိုးဖုန်းတွေကနေ ပြည်ပခေါ်ဆိုခကို ဈေးလျှော့ပေးတာ အကောင်းမဟုတ်ဘူး။ ပြည်ပကိုဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှာ ကြိုးဖုန်းတွေကို အသုံးပြုတဲ့လူ နည်းနေတဲ့အတွက် ၀င်ငွေနည်းနေလို့ လျှော့ပေးတာတဲ့။ ဈေးလျှော့ပေးတဲ့အတွက် ကြိုးဖုန်းကနေတစ်ဆင့် ပြည်ပခေါ်တဲ့လူတွေ များလာအောင်ပေါ့လေ။ အင်း... ပြောလိုက်ရင်တော့ မကောင်းရှိရော့မယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်က သြစတြေးလျကလပ်မှာလုပ်မယ်။ ဦးဆောင်ကျင်းပမှာက သြစတြေးလျနိုင်ငံက Sydney Law School တဲ့။ အင်း... သေချာတယ်... သတင်းမှာရေးထားတဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်အသီးသီးက ဖတ်ကြားမယ်ဆိုတာလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တောက်... သေသာသေလိုက်ချင်တော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေပညာရှင် မရှိတော့ဘူးလား။ အင်းလေ... ဘယ်ရှိတော့မလဲ ဥပဒေပညာရှင် အားလုံးကလည်း လွှတ်တော်ကိုကြောက်ပြီး ဥပဒေအကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းတောင် မပြောချင်လောက်အောင် ဖြစ်သွားကြရရှာတာကိုး။ ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ ဘာပဲလုပ်လုပ် နိုင်ငံခြားဖြစ်မှ အထင်ကြီးတဲ့ရောဂါက အတော်အမြစ်တွယ်နေပြီကိုး။ အခုဆွေးနွေးပွဲကို ဦးရွှေမန်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မယ်တဲ့။ မပြောတော့ဘူးလို့နေတာ... မပြောရင်မဖြစ်လို့ ပြောလိုက်ဦးမယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ဖွဲ့တဲ့ကိစ္စကို အဆိုတင်တာရော၊ ထောက်ခံတာရော၊ အတည်ပြုတာရော SkyNet ကျေးဇူးနဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါကို The VOICE က ရေးထားပုံက သင်းပါ့ဗျာ။ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ဆဲတော့သာ ဆဲတဲ့လူ အပြစ်ဖြစ်တယ်။ ရေးတဲ့လူကလည်း ဆဲချင်အောင် ရေးတော့.....။ အို... ဆရာအောင်ထွဋ်ကို လွမ်းမိပါတော့တယ်။
ငွေကျပ် ၁၅၀၀ ကျပ်တန် တန်ဖိုးနည်းဖုန်းဆင်းကတ်တွေ အခု မေလကုန်မှာ ထပ်ချပေးမယ်တဲ့။ ၀မ်းသာရပါတယ်။ လစာငွေ အများအပြားမရှိရှာတဲ့ သာမန်လက်လုပ်လက်စားတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ ရကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ရွှေတွဲလွဲ၊ ငွေတွဲလွဲနဲ့ ပါဂျဲရိုးကားကြီးတွေ၊ မာစီးဒီးကားကြီးတွေစီး ရပ်ကွက်ရုံးကိုလာပြီး ဖုန်းဆင်းကတ် မဲနှိုက်ခြင်းမလုပ်ကြဖို့လည်း တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ တစ်လက်စတည်း ပြောချင်တာက ဈေးကွက်ဝယ်လိုအား ရှိနေလေတော့ ဆင်းကတ်တွေလှိမ့်ရောင်းပြီး ဖုန်းတွေခေါ်မရ၊ ပြုမရ မဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ပေးကြဖို့ တာဝန်ရှိသူများကို တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ပူပူလောင်လောင်သတင်းတွေ ဖတ်ရတာလည်း အတော်ကြီးကို စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ မလုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်ရို့။ နိုင်ငံကဖြင့် အခုအချိန်အထိ သူများနောက်ကနေ မတက်နိုင်သေးဘူး။ တဂျိန်းဂျိန်း၊ တဒိုင်းဒိုင်း လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကို လျှော့ကြပါကွယ်ရို့။ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ခုက သူတို့ကို တရားမ၀င် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောဆိုရေးသာတာကို သဘောမတူဘူးတဲ့။ ခက်ချေပေါ့တကား။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို နားမလည်ဘူးထင်ပါရဲ့။ စာမဖတ်တတ်ကြဘူးထင်ပါရဲ့။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မြန်မာလိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လိုပါ ဖတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခေါက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။ တွေ့တဲ့လူတွေကိုစု၊ လက်နက်ဝယ်၊ ဓားပြသာသာ အလုပ်တွေလုပ်၊ ဒေသတစ်ခုခုနာမည်၊ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးစုတစ်ခုခုရဲ့ နာမည်တပ်ပြီး အဲဒီဒေသ/လူမျိုး လွတ်မြောက်ရေးအတွက် လုပ်တာပါလို့ပြော၊ ဒါဆိုရင် တပ်မတော်ဖြစ်ပြီလား။ တရားဝင်ပြီလား။ ဟေ့... ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်... ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ငါတို့နိုင်ငံမှာ တရားဝင်တပ်မတော်ဆိုတာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့ လူတိုင်းကို တပ်မတော်သတ်မှတ်ပြီး ကြောက်ရလောက်အောင် ငါတို့ မတုံးဘူး၊ မအဘူး၊ အရေမထူဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး ၁၄ ခုပဲ ရှိလို့ တော်ရော့တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တပ်မတော်ဆိုပြီး ဖွဲ့ထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်သူပုန်က အဖွဲ့ ၂၀ လောက်ရှိတယ်။ အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အလျှော့ပေးလေ၊ ဒင်းတို့က လက်တစ်ဆုံးနှိုက်လေပဲ။ မြောက်ကိုရီးယား လုပ်တဲ့အပေါက်မျိုးတော့ မလုပ်ကြလေနဲ့။ တပ်မတော်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အားလုံးကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းပစ်ပါဆိုပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေ လုပ်ပစ်လိုက်မယ်။ ဘာမှတ်နေလဲ။ လက်နက်ကိုင်ချင်ရင်၊ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ချင်ရင်၊ ကာကွယ်ရေးလုပ်ချင်ရင် တပ်မတော်ထဲကိုသွားပေါ့ကွ။ ကိုယ်ပိုင်တပ်မတော်များ ထူထောင်ရန်မလိုပါ။ ငါသိငါတတ် မီဒီယာများ နှုတ်ဆိတ်နေကြသည်၊ နှာစေးနေကြသည်၊ ပါးစပ်တွေပိတ်နေကြသည်၊ ဆွံ့အနေကြသည်။ ရှိစေတော့တကား...။
ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် နိုင်ငံရေးပညာရှင်မဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ဘွဲ့ဒီဂရီများလည်း မရှိပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း ကိုယ်စိတ်ဝင်စားသည့် သာမန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါသည်။ မြင်တွေ့ကြားသိနေသမျှအပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ခံစားချက်များကို စာသီကုံးမိခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ မှားသည်မှန်သည်ကိုတော့ စာဖတ်သူများသာ နှိုင်းချင့်ကြပါကုန်။ လွန်တာရှိက ၀န္ဒာမိပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။
ညနေ ၆ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင်ပြီး၏။
Posted by Ko Nyan Posted Time 7:02 PM4Comment(s) Link This